ကမ္ဘာကျော်များ | ဆိုင်မွန်စာကြည့်ဆိုဒ်
Showing posts with label ကမ္ဘာကျော်များ. Show all posts
ဘောလုံး စွမ်းရည် ပြသခဲ့သည့် စီရော်နယ်ဒို၏ သားငယ်
ကမ္ဘာကျော် ဘောလုံး စတား စီရော် နယ်ဒိုရဲ့ သားငယ်ဟာ အံ့ဖွယ် ဘောလုံး စွမ်းရည် ပြသနိုင်တဲ့ ပါရမီရှင် ကလေးငယ် တဦးပါ။
သူ့ကို ၂၀၁၀ ပြည့်နှစ် ဇွန်လ ၁၇ ရက်နေ့မှာ မွေးခဲ့ တာဖြစ်လို့ လက်ရှိ မှာတော့ အသက် ၇ နှစ် ရှိနေပြီ ဖြစ် ပါတယ်။
ကယ်လီဖိုးနီးယား ပြည်နယ်၊ ဆန်ဒီယေးဂိုး မြို့မှာ မွေးဖွား ခဲ့တဲ့ ကလေးငယ်ရဲ့ မိခင် ဖြစ်သူကိုတော့ ထုတ်ဖော် မကြေညာ ခဲ့ဘဲ ရော်နယ်ဒိုက ဖခင် တဦးအဖြစ်သာ ပြုစု ပျိုးထောင် ထားခဲ့ တာပါ။
ရုပ်သံဗွီဒီယိုဖိုင်ထဲမှာတော့ ကမ္ဘာကျော် ဖခင်လိုပဲ ဘောလုံးကို အလိမ်အခေါက် ကစားကွက်တွေနဲ့ လျှင်လျှင်မြန်မြန် စွမ်းရည်ပြ ကစားခဲ့တာကို တွေ့ရမှာပါ။
လက်ရှိမှာတော့ အဲဒီကလေးငယ်ဟာ နာမည်ကျော်ကြား လူပုဂ္ဂိုလ်စာရင်း ကမ္ဘာ့အဆင့် ၂၃၁၆ ယောက်မြောက်နေရာမှာ ရပ်တည်နေတာပါ။
သူ့ကို ခရစ္စတီယန်နင်ဟိုဆိုတဲ့ နာမည်ပြောင်နဲ့ လူသိများပြီး ဖခင်ဖြစ်သူရဲ့ အပြည့်အဝ အုပ်ထိန်းမှုအောက်မှာ နေထိုင်နေတာ ဖြစ်ပါတယ်။
Originally published at - http://burmese.dvb.no/archives/210564
မျှဝေသူ Te Tee မှာ Monday, June 05, 2017 No comments:
ကဏ္ဍ ရုပ်/သံ, ကမ္ဘာကျော်များ, နိုင်ငံတကာသတင်း
ကမ္ဘာမြေကို ပထမဦးဆုံး ပတ်ပျံသန်းခဲ့သည့် နာမည်ကျော် အာကာသယာဉ်မှူး ကွယ်လွန်
အသက် ၉၅ နှစ် အရွယ်ရှိ အထက် လွှတ်တော် အမတ်ဟောင်း နာမည်ကျော် အမေရိကန် အာသယာဉ်မှူး ဂျွန်ဂလင်း ဒီဇင်ဘာ ၈ ရက်နေ့က အိုဟိုင်းအိုး ပြည်နယ်မှာ လူကြီး ရောဂါနဲ့ ကွယ်လွန် သွားပါတယ်။
သူဟာ ကမ္ဘာမြေကို ပတ်နိုင်တဲ့ ပထမဦးဆုံး အမေရိကန် အာကာသယဉ်မှူး ဖြစ်ပါတယ်။ မစ္စတာ ဂလင်းဟာ ဒုတိယ ကမ္ဘာစစ်နဲ့ ကိုးရီးယား စစ်ပွဲတွေမှာ Marine fighter pilot တဦး အဖြစ် တာဝန် ထမ်းခဲ့ပြီး တိုက်ပွဲ မစ်ရှင် ၁၄၉ ခု ပါဝင်ဆင်နွှဲ ခဲ့ပါတယ်။
အဲဒီနောက် အာကာသယဉ်မှူးတဦးဖြစ်လာပြီး ၁၉၆၂ ခုနှစ် ဖေဖော်ဝါရီလ ၂၀ ရက်နေ့မှာ Friendship7လို့ အမည်ပေးထားတဲ့ အာကာသယဉ်ကို ပျံတက်ရင်း ၅ နာရီအတွင်း ကမ္ဘာမြေကို ၃ ကြိမ်တိတိ ပတ်ပြနိုင်ခဲ့ပါတယ်။
အဲဒီအချိန်ကစလို့ သူဟာ အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုရဲ့အသည်းစွဲ နာမည်ကျော် အာကာသယဉ်မှူးတဦး ဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။
ဒီ့နောက်မှာတော့ အထက်လွှတ်တော် အမတ်တစ်ဦးအဖြစ် ၂၄ နှစ်ကြာ တာဝန်ထမ်းခဲ့ပြီး သမတလောင်းအဖြစ် တကြိမ်ဝင်ရောက် ယှဉ်ပြိုင်ခဲ့ဖူးပါတယ်။
မစ္စတာ ဂလင်း ဈာပန အခမ်းအနားကို အမေရိကန်နိုင်ငံရေးခေါင်းဆောင်တွေနဲ့ ထင်ရှားတဲ့အနုပညာရှင်အတော်များများ တက်ရောက်ဖို့ စီစဉ်ထားပါတယ်။
Originally published at - http://burmese.dvb.no/archives/179275
မျှဝေသူ Te Tee မှာ Saturday, December 10, 2016 No comments:
ကဏ္ဍ ကမ္ဘာကျော်များ, နိုင်ငံတကာသတင်း
၈၈ မျိုးဆက် ကိုမင်းကိုနိုင် နှစ်သစ်တွင် အိမ်ထောင်ပြုမည်
၈၈ မျိုးဆက် ကျောင်းသား ခေါင်းဆောင် ကိုမင်းကိုနိုင် သည် ၂၀၁၇ ဇန်နဝါရီ လဆန်း တွင် အိမ်ထောင် ပြုတော့မည် ဖြစ်ကြောင်း သတင်း ရရှိသည်။
အသက် (၅၄)နှစ် အရွယ် လူပျိုကြီး ကိုမင်းကိုနိုင်သည် ဩစတြေးလျ နိုင်ငံတွင် နေထိုင် အလုပ် လုပ်ကိုင်လျက် ရှိသော မြန်မာ အမျိုးသမီး ဆရာဝန် တစ်ဦးနှင့် ရွှေလက် တွဲ၍ လူပျိုကြီး ဘဝ အဆုံး သတ်တော့မည် ဖြစ်ကြောင်း 7Day Daily က အတွင်း သတင်း ရရှိ ထားသည်။
ဇန်နဝါရီတွင် မင်္ဂလာဦး ဆွမ်းကျွေး မင်္ဂလာ ကျင်းပပြီးမှ မင်္ဂလာ ဧည့်ခံပွဲကို ရန်ကုန်မြို့၌ ကျင်းပမည် ဖြစ်ကြောင်း သတင်း ရရှိသည်။
မင်္ဂလာ သတင်းနှင့် ပတ်သက်၍ 7Day က ကိုမင်းကိုနိုင် အား မေးမြန်းရာ ကြားသည့် အတိုင်း တကယ်ဖြစ်လျှင် ကောင်းတာပေါ့ဟု ၎င်းက ရယ်မော၍ ပြောသည်။
‘‘ကျွန်တော့်လို လူကို ဘယ် သူမှ မယူလောက် ဘူးနော်’’ဟု ကိုမင်းကိုနိုင်က ရယ်မော၍ ဆက်လက် ပြောကြားသည်။ သို့သော် မင်္ဂလာသတင်း နီးလာလျှင်7Day ကို ပထမဆုံး ပြောမည်ဟု ဆိုပါသည်။
‘‘သူ (မင်းကိုနိုင်) အိမ်ထောင်ပြုတော့မယ်လို့ ကျွန်တော့်ကို ပြောတယ်။ သူ အိမ်ထောင်ပြု တော့မယ်ဆိုတာတော့ သိတယ် ဗျ။ မိန်းမယူတာပဲ ကောင်းတာ ပေါ့ဗျာ။ လူ့ဘဝ ပြည့်စုံတာပေါ့။ ဒါလည်း လုပ်ရမယ့် အလုပ်ပဲ လေ။ လူ့တာဝန်ပဲ။
ဒီဟာက ပေါက်ဖွားလာမယ့် မျိုးဆက်က လည်း သူ့အတွက်ပဲလေ။ ဘာပဲ ပြောပြော မင်္ဂလာယူပါတယ်။ ဆုလည်း ဆုတောင်းပါတယ်။ ကြိုလည်း ကြိုဆိုပါတယ်ဗျာ’’ဟု ကိုမင်းကိုနိုင်နှင့်အတူ စာပေ ဟောပြောပွဲများ သွားရောက် ဟောပြောသူ မိုးလေဝသပညာရှင် ဒေါက်တာထွန်းလွင်ကလည်း မုဒိတာစကားပြောကြားသည်။
ကိုမင်းကိုနိုင်နှင့်အတူ စာပေဟောပြောပွဲများ သွားရောက်ဟောပြောသူ စာရေးဆရာမောင်သာချိုကလည်း အောက်ပါအတိုင်း မင်္ဂလာသတင်းအတွက် မုဒိတာ ပွားသည်။
‘‘သူတို့တွေကထောင်တွေထဲမှာ အများကြီးပေးဆပ်ခဲ့ရတာလေ။ ဆရာနန္ဒာသိန်းဇံ ပြောသလိုပေါ့။ လူရယ်လို ဖြစ်လာမှတော့ ဘဝကြင်ဖော်ရှာတာ လူသားဆန် ပါတယ်တဲ့။ ဒီအတိုင်းနေ တာထက် စာရင် လူသားဆန် လာတယ်ပေါ့။ ရိုင်းတာပြောတာ မဟုတ်ဘူး။
သားသမီးတွေရရင် အနစ်နာခံတာတွေ၊ ဘာတွေ အများကြီးပါလာတာကိုး။ ကိုမင်းကိုနိုင်လည်း စာရေးတယ်။ ကဗျာ ရေးတယ်။ ပန်းချီဆွဲတယ်။ လူသားဆန်တာပေါ့။
ဒါပေမဲ့ မိန်းမယူတာလေးပဲ ကျန်တာပဲလေ။ နောက်ပြီးမျိုးဆက်ထူထောင်တာ ကောင်းတယ်။ ကျွန်တော်တော့ မျိုးဆက်ပြတ်တာ မကြိုက်ဘူးဗျ။
ဘာမှမကျန်ဘဲ သေသွားတာ မကောင်းဘူးလေ။ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း သေသွားတယ်။ ဒါပေမဲ့ သူ့သမီး အောင်ဆန်းစုကြည် ကျန်ခဲ့တယ်လေ။ မိုက်တယ်။ လူဟာ မျိုးဆက်တစ်ခု ကျန်ခဲ့ရမယ်လေ’’။
ကိုမင်းကိုနိုင်ကို ၁၉၆၂ အောက်တိုဘာ ၁၈ ရက်တွင် မွန် ပြည်နယ် မုဒုံမြို့နယ်၌ မွေးဖွားခဲ့ သည်။ ၁၉၈၈ တွင် ရန်ကုန်ဝိဇ္ဇာ/ သိပ္ပံတက္ကသိုလ် တတိယနှစ်၊ ရုက္ခဗေဒ ဘာသာရပ်၌ ပညာသင်ကြား နေစဉ် တစ်ပါတီအာဏာရှင်စနစ် အား ဆန့်ကျင်သော ကျောင်းသား လှုပ်ရှားမှုကို ဦးဆောင်ခဲ့သည်။
၈၈ အရေးတော်ပုံကာလ၌ ဗမာ နိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာ ကျောင်းသားများ သမဂ္ဂကို ဦးဆောင်ဖွဲ့စည်းခဲ့ပြီး စစ်အစိုးရကို တုန်လှုပ်စေခဲ့ကာ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ပြီးလျှင် အထင်ရှားဆုံးပုဂ္ဂိုလ် ဖြစ်ခဲ့သည်။
၁၉၈၉ အောက်တိုဘာတွင် စစ်ထောက်လှမ်းရေး၏ ဖမ်းဆီး ခြင်းခံရပြီး အင်းစိန်ထောင်နှင့် စစ် တွေထောင်တို့၌ ၁၆ နှစ်တိုင်တိုင် အကျဉ်းကျခံခဲ့ရသည်။
၂၀၀၄ နှောင်းပိုင်းတွင် ပြန်လည်လွတ် မြောက်လာခဲ့ပြီး ကျောင်းသား အင်အားစုကို ပြန်လည်ဦးဆောင် ကာ အာဏာရှင်ဆန့်ကျင်ရေး၊ ဒီမိုကရေစီရရှိရေး လှုပ်ရှားမှုများ ကို ဆက်လက်ပြုလုပ်ခဲ့သည်။ ၂၀၀၇ တွင် လောင်စာဆီဈေးနှုန်း မြင့်တက်ခဲ့၍ အစိုးရကို ဆန့်ကျင်ကန့်ကွက်သည့် စီတန်းလမ်း လျှောက်ဆန္ဒပြပွဲ၌ ဦးဆောင် ပါဝင် ခဲ့ပြီးနောက် စစ် အစိုးရက ဖမ်းဆီးထောင်ချ ခဲ့ပြန်ကာ ၂၀၁၂နှစ်ဆန်းပိုင်း တွင်မှ ပြန်လည်လွတ် မြောက် လာခဲ့သည်။
ကိုမင်းကိုနိုင်သည် ၈၈ မျိုး ဆက်ကျောင်းသားများအား ပြန် လည်စုစည်းကာ အရပ်ဘက်လူ့ အဖွဲ့အစည်းအားကောင်းလာ ရေး ရည်ရွယ်ချက်ဖြင့် ငြိမ်းချမ်း ရေးနှင့် ပွင့်လင်း လူ့အဖွဲ့အစည်း ဖော်ဆောင်ရေး လုပ်ငန်းများကို ဆက်လက် လုပ်ဆောင်နေဆဲဖြစ် သည်။
ကိုမင်းကိုနိုင်၏ ဒီမိုကရေ စီအရေး၊ လူ့အခွင့်အရေး၊ အာဏာရှင်ဆန့်ကျင်ရေးလှုပ်ရှားမှုများအတွက် နော်ဝေး၊ ချက်၊ ကနေဒါ၊ အမေရိကန်နိုင်ငံတို့မှ ဂုဏ်ပြုဆုများ ချီးမြှင့်ခြင်းခံခဲ့ရသည်။
ယခု နောက်ပိုင်း စာပေဟောပြောပွဲများ ဟောပြောခြင်း၊ ပန်းချီရေးဆွဲခြင်း၊ ဆောင်းပါးများ ရေးသားခြင်း၊ ကဗျာများ ရေးသားခြင်း၊ ဝတ္ထုတို၊ ဝတ္ထုရှည်များ ရေး သားခြင်း၊ တေးသီချင်းများ ရေးသားခြင်း စသည့်လုပ်ငန်းများကို အဓိကလုပ်ကိုင်လျက်ရှိသည်။
ကိုမင်းကိုနိုင်၏ အရင်းနှီးဆုံး မိတ်ဆွေဖြစ်သည့် ၈၈ မျိုးဆက် ကျောင်းသားခေါင်းဆောင် ဦးကိုကိုကြီးမှာလည်း ၂၀၁၂ တွင် ထောင်မှလွတ်မြောက်လာပြီးမှ ၂၀၁၄တွင် အိမ်ထောင်ပြုခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။
From :7day daily - By : ငြိမ်းချမ်း
Originally published at - http://www.7daydaily.com/story/82676
မျှဝေသူ Te Tee မှာ Monday, December 05, 2016 No comments:
ကဏ္ဍ ကမ္ဘာကျော်များ, ပြည်တွင်းသတင်း
ကမ္ဘာ့ဟဲဗီးဝိတ် ချန်ပီယံဟောင်း မိုဟာမက်အလီ ကွယ်လွန်ပြီ
အသက်ရှူ လမ်းကြောင်း ဆိုင်ရာ ပြဿနာ တခုကြောင့် ဆေးရုံ တက်ရောက် ကုသမှု ခံနေ ရတဲ့ ကမ္ဘာ့ ဟဲဗီးဝိတ် ချန်ပီယံဟောင်း မိုဟာမက် အလီဟာ ဇွန် ၄ ရက်နေ့က ကွယ်လွန် သွားပြီလို့ မီဒီယာ တွေမှာ ဖော်ပြ ပါတယ်။
တခေတ် တခါက အလွန်အောင်မြင် ကျော်ကြားခဲ့တဲ့ အလီဟာ လက်ရှိ အသက် ၇၄ နှစ် ရှိနေပြီး အသက်ရှူ လမ်းကြောင်းဆိုင်ရာ ရောဂါ ဆိုးလာ တာကြောင့် ဇွန် ၂ ရက်က Phoenix ဖိနစ် နယ်မြေက ဆေးရုံတရု့မှာ တင်ခဲ့ရတာပါ။
ကမ္ဘာ့ဟဲဗီးဝိတ် ချန်ပီယံ ဆုကို ၃ ကြိမ် တိုင်တိုင် ရရှိခဲ့တဲ့ မိုဟာမက် အလီဟာ ၁၉၈၁ ခုနှစ်မှာ ပြိုင်ဘက် ထရီဗာဘားဗစ်နဲ့ ယှဉ်ပြိုင် ထိုးသတ် အပြီး အနားယူ ခဲ့တာပါ။
လက်ဝှေ့လောကကနေ အနားယူပြီး ၃ နှစ်အကြာမှာ အသက်ရှူလမ်းကြောင်းဆိုင်ရာ ရောဂါကို စတင်ခဲ့စားခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။
အဲဒီနောက်ပိုင်းနှစ်တွေမှာတော့ သူဟာ ဆေးရုံကို အကြိမ်ကြိမ် တက်ရောက်ကုသမှုတွေ ခံယူခဲ့ရပါတယ်။ ၂၀၁၄ ခုနှစ်မှာတော့ သူဟာ အဆုတ်ယောင်ရောဂါ ခံစားခဲ့ရကာ ၂၀၁၅ ခုနှစ်မှာတော့ ဆီးလမ်းကြောင်းဆိုင်ရာ ရောဂါကြောင့် ဆေးရုံတက်ခဲ့ရပါတယ်။
ကန်တက္ကီ ပြည်နယ်မှာ မွေးတဲ့ အလီဟာ လက်ဝှေ့လောကမှာ ပွဲတိုင်းနီးပါး အနိုင်ရသူ ဖြစ်လို့ “The Greatest,” မဟာလက်ဝှေ့ကျော် အဖြစ်လည်း တင်စား ခေါ်ကြပါတယ်။
ဒီဗွီဘီ by DVB
Originally published at - http://burmese.dvb.no/archives/153150
မျှဝေသူ Te Tee မှာ Saturday, June 04, 2016 No comments:
ကဏ္ဍ ရုပ်/သံ, ကမ္ဘာကျော်များ, နာရေးသတင်း, နိုင်ငံတကာသတင်း
ကမ္ဘာ့ဟဲဗီးဝိတ် ချန်ပီယံဟောင်း မိုဟာမက်အလီ ဆေးရုံတက်ရောက် ကုသမှု ခံယူ
ကမ္ဘာ့ ဟဲဗီးဝိတ် ချန်ပီယံဟောင်း မိုဟာမက် အလီဟာ အသက်ရှူ လမ်းကြောင်း ဆိုင်ရာ ပြဿနာ တခုကြောင့် ဆေးရုံ တက်ရောက် ကုသမှု ခံနေ ရတယ်လို့ သူ့ရဲ့ ပြောရေး ဆိုခွင့် ရသူတဦးက ဇွန် ၂ ရက်နေ့မှာ ပြောပါတယ်။
အသက် ၇၄ နှစ် အရွယ်ရှိနေပြီ ဖြစ်တဲ့ မိုဟာမက် အလီဟာ အာရုံကြော အဖွဲ့အစည်း ဆိုင်ရာ ရောဂါ တမျိုးဖြစ်တဲ့ ပါကင်ဆန် ရောဂါကို ခံစားခဲ့ရပြီး ခုချိန်မှာတော့ သက်သာလာခဲ့ပြီလို့ သတင်းထုတ်ပြန်ချက်တခုမှာ ပြောရေးဆိုခွင့်ရသူ ဘော့ဂန်နဲလ်က ပြောပါတယ်။
“ဆေးရုံမှာ ကြပ်ကြပ်မတ်မတ် ကုသမှုတွေလုပ်နိုင်ဖို့ မျှော်လင့်ပါတယ်” လို့ သူက ပြောပါတယ်။
အီးအက်စ်ပီအန် သတင်းတပုဒ်မှာတော့ မိုဟာမက်အလီဟာ ဖီးနစ်စ်မှာ ဆေးရုံတက်ရောက် ကုသမှုခံခဲ့တာလို့ ဖော်ပြပါတယ်။
ကမ္ဘာ့ဟဲဗီးဝိတ်ချန်ပီယံဆုကို ၃ ကြိမ်တိုင်တိုင် ရရှိခဲ့တဲ့ မိုဟာမက်အလီဟာ ၁၉၈၁ ခုနှစ်မှာ ပြိုင်ဘက် ထရီဗာဘားဗစ်နဲ့ ယှဉ်ပြိုင်ထိုးသတ်အပြီး အနားယူခဲ့တာပါ။
အဲဒီနောက်ပိုင်းနှစ်တွေမှာတော့ သူဟာ ဆေးရုံကို အကြိမ်ကြိမ် တက်ရောက်ကုသမှုတွေ ခံယူခဲ့ရတာဖြစ်တယ်လို့ ဘန်ကောက်ပို့စ်သတင်းမှာ ဖော်ပြပါတယ်။
၂၀၁၄ ခုနှစ်မှာတော့ သူဟာ အဆုတ်ယောင်ရောဂါ ခံစားခဲ့ရကာ ၂၀၁၅ ခုနှစ်မှာတော့ ဆီးလမ်းကြောင်းဆိုင်ရာ ရောဂါကြောင့် ဆေးရုံတက်ရောက် ကုသမှုတွေ ခံခဲ့ရတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
Originally published at - http://burmese.dvb.no/archives/153004
မျှဝေသူ Te Tee မှာ Friday, June 03, 2016 No comments:
ထူးချွန်ထက်မြက်တဲ့ မြန်မာ အမျိုးသမီးခေတ် တစ်ခေတ်ရဲ့ ရှေ့ဆောင် လမ်းပြများ
မြန်မာ့နိုင်ငံရေး ဒီမိုကရေစီ အကူး အပြောင်းကို အကြမ်း မဖက်ရေးမူနဲ့ ညင်သာစွာ ဦးဆောင် ကိုင်တွယ် ခဲ့သူကတော့ လူထု ခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်း စုကြည် ဖြစ်ပါတယ်။
လူထု ခေါင်းဆောင်ဟာ မြန်မာပြည်သူ လူထုကို ညီညီ ညွတ်ညွတ်နဲ့ သန့်ရှင်းတဲ့ နိုင်ငံရေး လမ်းစဉ်ကိုသာ လျှောက်စေ ချင်သူ ဖြစ်ပြီး နှစ်ပေါင်း ရှည်ကြာစွာ ဖြစ်ပွား ခဲ့ရတဲ့ အမျိုးသား သွေးကွဲမှုကြီး နိဂုံး ချုပ်စေဖို့ အမျိုးသား ရင်ကြားစေ့ရေး မူကို လက်ကိုင် ထားသူလည်း ဖြစ်ပါတယ်။
မြန်မာနိုင်ငံကို အဖက်ဖက်မှ တိုးတက် ဖွံ့ဖြိုးစေချင်သူ ဖြစ်ပြီး ပြည်သူလူထု တစ်ရပ်လုံး နိုင်ငံရေး နိုကြားမှု ရှိအောင်၊ တစ်ဦးနဲ့ တစ်ဦး လေးစား တတ်အောင်၊ ပြည်သူ တစ်ဦးချင်း စီမှာရှိတဲ့ တန်ဘိုးကို သိရှိ နားလည် လာအောင်၊ လမ်းညွှန်ပေး ခဲ့ပါတယ်။
ဒါ့အပြင် တိုင်းပြည်ရဲ့ အနာဂတ် ခေါင်းဆောင် ဖြစ်တဲ့ ကလေးငယ် တွေရဲ့ စိတ်ဓါတ်ကို အခြေခံက စပြီး ပြုပြင် လိုက်နိုင်အောင်၊ စည်းကမ်း ရှိတဲ့ နိုင်ငံ ကြီးသားတွေ ဖြစ် လာအောင်၊ နိုင်ငံသား အချင်းချင်း မျှဝေ ခံစား တတ်အောင် ကိုယ်တိုင် လုပ်ပြပြီး လူထုကို ဦးဆောင် ခဲ့သူလည်း ဖြစ်ပါတယ်။
ဒါ့ကြောင့် မြန်မာနိုင်ငံ သာမက ကမ္ဘာ့ခေါင်းဆောင်တွေ ကပါ အသိအမှတ်ပြု လေးစားတဲ့ လူထု ခေါင်းဆောင်ကို ထူးချွန် ထက်မြက်တဲ့ မြန်မာ့ အမျိုးသမီးများ စုစည်း တင်ဆက်မှုမှာ ဦးစွာ ပထမ ဂုဏ်ပြု မှတ်တမ်း တင်လိုက် ပါတယ်။
မြန်မာနိုင်ငံ ဒေသအသီးသီးမှာ အမျိုးသမီးတွေရဲ့ စွမ်းဆောင်နိုင်မှုကို ပြသ ခဲ့ကြတဲ့ အမျိုးသမီး အုပ်ချုပ်ရေးမှူး ၄၂ ဦး ရှိပါတယ်။ ဒါဟာ တနိုင်ငံလုံးက ရပ်ကျေး အုပ်ချုပ်ရေးမှူး ၁၆၇၈၅ ယောက်ထဲမှာ ၄၂ ဦးပဲ ပါဝင်တဲ့ အနေအထားဖြစ်ပြီး တိတိကျကျ တွက်ချက်ကြည့် ရင်တော့ ၀. ၂၅ ရာခိုင်နှုန်းသာ ရှိတာကို တွေ့ကြရမှာပါ။
ဒီလိုအနေအထားဟာ ကြေနပ်စရာကောင်းတဲ့ အနေအထားမဟုတ်ဘူးဆိုတာ သိပေမယ့် အဲဒီ ၄၂ ဦးဟာဖြင့် မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ ထူးချွန်ထက်မြက်တဲ့ အမျိုးသမီး တစ်ခေတ်ရဲ့ ရှေ့ဆောင် လမ်းပြ များရယ်လို့တော့ သတ်မှတ်လို့ ရပါတယ်။
အဲဒီအမျိုးသမီး ၄၂ ဦးဟာ ရပ်ကျေးအဆင့်မှာ ပါဝင်မှုဖြစ်ပြီး မြို့နယ်အဆင့်မှာဆိုရင် အမျိုးသမီး အုပ်ချုပ်ရေးမှူး တစ်ယောက်မှ မရှိသေးဘူးလို့ သိရပါတယ်။
ဒီ ရပ်ကျေးအုပ်ချုပ်ရေးမှူးအမျိုးသမီးတွေဟာ မြန်မာ့ယဉ်ကျေးမှုထုံးတမ်းအစဉ်အလာတွေ၊ အိမ်ထောင့်တာဝန်တွေအပြင် အခြားစိန်ခေါ်မှုတွေလည်း အများကြီးရှိနေပါသေးတယ်။
ဒါပေမယ့် ကျရာတာဝန်တွေကို အမျိုးသားတွေနဲ့ ရင်ဘောင်တန်း ထမ်းဆောင်နိုင်ခဲ့ကြတဲ့အပြင် နောင်အနာဂတ်မှာ အမျိုးသမီးခေါင်းဆောင်တွေ ထွက်ပေါ်လာအောင် တွန်းအားပေးနိုင်သူတွေလည်း ဖြစ်ပါတယ်။
ဒါကြောင့်မို့ မြန်မာ့အသိုက်အ၀န်းထဲက ထူးချွန်ထက်မြက်တဲ့ အမျိုးသမီးများအကြောင်း စုစည်းမိတ်ဆက်တဲ့အထဲ ထည့်သွင်း မှတ်တမ်းတင်လိုက်ပါတယ်။
နောက်ထပ် မှတ်တမ်းတင်မယ့်သူကတော့ ကရင် အမျိုးသမီး ဒေါက်တာ စင်သီယာမောင် ဖြစ်ပါတယ်။ ဒေါက်တာစင်သီယာမောင်ဟာ မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ အလေးစားရဆုံး လူထုအကျိုးဆောင် အမျိုးသမီးတစ်ဦးအဖြစ် တောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံ အခြေစိုက် အိုင်အယ်လ်ဂျီအေ ဖေါင်ဒေးရှင်းက ရွေးချယ်ပေးအပ် တာဖြစ်ပြီး ၂၀၁၅ ခု စက်တင်ဘာလ ၅ ရက်နေ့မှာ ဒီဂုဏ်ပြုဆု ပေးအပ် ချီးမြှင့်ခြင်း ခံရပါတယ်။
ဒီဆုဟာ သက်ဆိုင်ရာနယ်ပယ်အလိုက် ပြောင်မြောက်စွာ ဆောင်ရွက်နေသူ အာရှသားတွေကို ရွေးချယ်ပေးအပ်တဲ့ဆုဖြစ်ပါတယ်။ ဒေါက်တာစင်သီယာမောင်ဟာ ထိုင်းနိုင်ငံ မဲဆောက်မြို့မှာ မယ်တော်ဆေးခန်းကို ဖွင့်လှစ်ထားပြီး မြန်မာနိုင်ငံကနေ ထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်ကိုရောက်လာတဲ့ ဒုက္ခသည်တွေ၊ မိဘမဲ့ကလေးတွေ၊ ရွှေ့ပြောင်းအလုပ်သမားတွေ နာမကျန်းဖြစ်လာတဲ့အခါမှာ ကုသစောင့်ရှောက်ပေးနေသူ ဖြစ်ပါတယ်။
ဆေးခန်းစတင်တည်ထောင်စဉ် ၁၉၈၉ ခုနှစ်မှာ ဒီလုပ်ငန်းကို တိတ်တဆိတ် လုပ်ကိုင်ခဲ့ရပေမယ့် အခုအချိန်မှာတော့ စေတနာ့ဝန်ထမ်းတွေအပါအ၀င် ၁၂၀ ပါဝင်တဲ့ အခမဲ့ ကျန်းမာရေး ဆေးခန်းကို ဦးဆောင်နေပြီဖြစ်ပါတယ်။
နောက်ထပ် မှတ်တမ်းတင် ဂုဏ်ပြုမယ့်သူကတော့ ကချင်တိုင်းရင်းသူ သတင်းစာဆရာမ မအက်စတာထုဆံ ဖြစ်ပါတယ်။ သူဟာ အမေရိကန်နိုင်ငံက သတင်းစာဆရာမ သုံးဦးနှင့် အတူတွဲပြီး ဆု ချီးမြှင့်ခံရပါတယ်။ သူဟာ အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံက ပင်လယ်စာစက်ရုံအတွင်း လူ့အခွင့်အရေးချိုးဖေါက်ခံရတဲ့ ရေလုပ်သားတွေအကြောင်းကို စုံစမ်းဖေါ်ထုတ် ရေးသားနိုင် ခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့် ဒီဆုကို ရခဲ့တာပါ။
ဒီသတင်းအတွက် တစ်နှစ်ကျော် အချိန်ယူပြီးရေးခဲ့ ရပေမယ့် ဒီသတင်းဆောင်းပါးကြောင့် လူ့အခွင့်အရေး ချိုးဖေါက်ခံနေရတဲ့ ရေလုပ်သား ၂၀၀၀ ကျော် လွတ်မြောက်လာ ခဲ့ကြ ရပါတယ်။
နောက်တစ်ယောက်ကို မိတ်ဆက်ပေး ချင်ပါသေးတယ်။ သူကတော့ အာရှ ကာယဗလမယ် ပြိုင်ပွဲမှာ ရွှေတံဆိပ်ဆု ရရှိခဲ့တဲ့ ကာယကြံ့ခိုင်မှုအလှမယ် နန်းလောင်ခမ်း ဖြစ်ပါတယ်။
သူဟာ ၂၀၁၅ ခု အောက်တိုဘာလ ၅ ရက်က ဥစဘက်ကစ္စတန်နိုင်ငံမှာပြုလုပ်သွားတဲ့ ၄၉ ကြိမ်မြောက် အာရှ ကာယဗလနဲ့ ကိုယ်ကာယ ကြံ့ခိုင်မှု ပြိုင်ပွဲမှာ မြန်မာနိုင်ငံ အတွက် ရွှေတံဆိပ် ဆုကို နန်းလောင်ခမ်း ရယူပေး ခဲ့တာပါ။
ပြိုင်ပွဲနောက်ဆုံးအဆင့်မှာ ဗီယက်နမ်၊ တရုတ်နဲ့ တာကစ္စတန်နိုင်ငံတွေ ယှဉ်ပြိုင် အနိုင်ရရှိ ခဲ့တာပါ။ ကာယဗလမယ် နန်းလောင်ခမ်းဟာ မန္တလေးတိုင်း လက်ရွေးစင် တစ်ဦးဖြစ်ပြီး ကာယကြံ့ခိုင်မှု ကစားနည်းကို ၂၀၁၄ ခုမှ စတင် ကစား ခဲ့ပါတယ်။ စတင်ကစားပြီး တစ်နှစ်အတွင်းမှာပဲ နိုင်ငံအတွက် ရွှေတံဆိပ်ဆုကို ရယူပေးနိုင်ခဲ့ပါတယ်။
နောက်တစ်ဦးကတော့ ပရဟိက လုပ်ငန်းကနေ တိုင်းပြည် ဖွံ့ဖြိုးရေးကို ဦးတည်ဖို့ ဦးဆောင် လှုပ်ရှားနေသူ ခင်နှင်းကြည်သာ ဖြစ်ပါတယ်။ သူဟာ မြန်မာနိုင်ငံအတွင်း သဘာဝဘေး အန္တရယ်ကျရောက်ရာ အရပ်မှာ ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ပြန်လည် ထူထောင်ရေးလုပ်ငန်းတွေ လုပ်နေတဲ့ တကိုယ်တော်ပရဟိတ သမားများကို ဦးဆောင်နေသူ တစ်ဦး ဖြစ်ပါတယ်။
သူဟာ ဒေသခံတွေကိုယ်တိုင် ကိုယ့်ဒေသကိုယ် ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းတွေမှာ ပါဝင်လာအောင် ပရဟိတလုပ်ငန်းကနေ တိုင်းပြည်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကို ဦးတည်နိုင်အောင် ဒေသ ခံတွေကို တာဝန် ယူမှုနဲ့ တာဝန်ခံ မှုကို သိရှိ နားလည်အောင် စည်းရုံးဟောပြောပေးပြီး ကိုယ်တိုင်လည်း ခက်ခဲကြမ်းတမ်းတဲ့ နေရာတွေ အထိ သွားရောက် ကူညီပေးနေ သူဖြစ်ပါတယ်။
ကွန်ရက် စတင်ထူထောင်စဉ်က မြိုင်မြို့နယ်မှာတည်ရှိတဲ့ တောတိုက်ရွာငယ်လေးတွေမှာ ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းတွေလုပ်ဆောင်ခဲ့ပြီး အခုအချိန်မှာတော့ တနိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာနဲ့ ပရဟိတအဖွဲ့ချင်း ချိတ်ဆက် ဆောင်ရွက်နေပြီ ဖြစ်ပါတယ်။
နောက်ထပ် မှတ်တမ်းရမယ့်သူကတော့ အခမဲ့ လူနာတင်ယာဉ်ကို ကိုယ်တိုင် မောင်းနှင်ပြီး လူနာတွေကို သယ်ယူ ပို့ဆောင်ပေးနေတဲ့ မရွှေကြာဖြစ်ပါတယ်။
အခက်အခဲရှိတဲ့ လူနာတွေကို သယ်ပို့ပေးဖို့ အခမဲ့ကူညီနေတဲ့ ရှင်းသန်ရေးကူညီမှုအသင်းကို ဦးဆောင်လှုပ်ရှားနေသူဖြစ်ပြီး အခုဆိုရင် ရန်ကုန်ဆေးရုံကြီးနဲ့ ဗဟို အမျိုးသမီး ဆေးရုံ ကြီးမှာ နံနက်စာ အာဟာရ ကျွေးတဲ့ အလုပ်ကိုပါ ဦးဆောင် လုပ်ကိုင်နေသူဖြစ်ပါတယ်။
မရွှေကြာဟာ ဒီလို ပရဟိတအလုပ်တွေကို ကိုယ်တိုင်တွေ့ကြုံ ခံစားခဲ့ရတဲ့ ကိုယ်ချင်း စာစိတ်နဲ့ စတင် လုပ်ကိုင် ခဲ့သူဖြစ်ပြီး ပရဟိတ အလုပ်ထဲ ခြေစုံပစ် ၀င်ရောက် ခဲ့သူလည်း ဖြစ်ပါတယ်။
အရေးပေါ်အခြေအနေတွေမှာ အကူအညီပေးဖို့အတွက် အချိန်ပြည့်ရှိနေပြီး ဂရုတစိုက် ကူညီပေးတဲ့အတွက် အခုဆိုရင် လူနာတွေရဲ့ ယုံကြည်ကိုးစားမှုကိုပါ ရရှိနေပြီဖြစ်ပါတယ်။
ဒါ့အပြင် လုပ်အားပေး ကူညီသူတွေ၊ လူနာတင်ယာဉ် လှူဒါန်းသူတွေ၊ မနက်စာ အာဟာရလှူဒါန်း သူတွေနဲ့ ရှင်သန်ရေး အဖွဲ့ကို ဆက်လက် လုပ်ဆောင်နေစဲ ဖြစ်ပါတယ်။
အခုနောက်ဆုံး မှတ်တမ်းတင် ဂုဏ်ပြုမယ့်သူကတော့ အဆိုတော် သရုပ်ဆောင် ချစ်သုဝေ ဖြစ်ပါတယ်။ အကြိမ် ၇၀ မြောက် ကုလသမဂ္ဂ အထွေထွေ ညီလာခံကို မြန်မာနိုင်ငံ ကိုယ်စားပြုပြီး ပထမဆုံး အကြိမ် တက်ရောက် ခဲ့တဲ့သူ ဖြစ်ပါတယ်။
ကလေးတစ်ယောက် ငါးနှစ်ရောက်ဖို့ ဒို့တတွေ ကူညီစို့ အစီစဉ်ကို ထောက်ခံ အားပေးတဲ့ အထူး သံတမာန် အနေနဲ့ ညီလာခံကို တက်ရောက် ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ ဒီညီလာခံကို အမေရိကန်နိုင်ငံ နယူးယောက်မြို့မှာ ရှိတဲ့ ကုလသမဂ္ဂ ဌာနချုပ်မှာ ပြုလုပ်တာဖြစ်ပြီး နိုင်ငံရေး၊ လူမှုရေး၊ ကျန်းမာရေး၊ ပညာရေး စတဲ့ ကဏ္ဍပေါင်းစုံမှာ ပါဝင် လှုပ်ရှားနေကြတဲ့ အစိုးရ မဟုတ်တဲ့ အဖွဲ့အစည်း ကိုယ်စားလှယ်တွေလည်း တက်ရောက် ခဲ့ကြပါတယ်။
ချစ်သုဝေအနေနဲ့ ကုလသမဂ္ဂ ရေရှည် ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်ရေး ရည်မှန်းချက် ၁၇ ချက်ထဲမှာ တကိုယ်ရေ သန့်ရှင်းရေး ကိစ္စ ပါဝင်နိုင်ရေးနဲ့ ပညာပေး လှုံ့ဆော်မှုတွေဟာ ကုလသမဂ္ဂရဲ့ ကူညီပံ့ပိုးမှု ရရှိဖို့ အတွက် မြန်မာနိုင်ငံ ကိုယ်စားပြု ဆောင်ရွက်နေသူ တစ်ဦးလည်း ဖြစ်ပါတယ်။
ငါးနှစ်အောက် ကလေးငယ်တွေ သေဆုံးမှုလျှော့ကျရေးလုပ်ငန်းတွေအပြင် စစ်ဘေးရှောင်စခန်းတွေ၊ သဘာဝဘေးသင့်ရာဒေသတွေဆီ သွားရောက်ပြီးတော့လည်း တကိုယ်ရေ သန့်ရှင်းရေး ကိစ္စ၊ စိတ်ဓါတ် ခွန်အားမြှင့်တင်ရေး ကိစ္စတွေ လုပ်ဆောင်ပေးနေသူ ဖြစ်ပါတယ်။
ဒါကြောင့်မို့ ချစ်သုဝေကိုလည်း မြန်မာ့အသိုက်အ၀န်းထဲက ထူးချွန်ထက်မြက်တဲ့ မြန်မာအမျိုးသမီးများ မှတ်တမ်းတင်မှုထဲ ထည့်သွင်း မှတ်တမ်းတင်လိုက်ပါတယ်။
Originally published at - http://mizzimaburmese.com/article/12960
မျှဝေသူ Te Tee မှာ Thursday, March 31, 2016 No comments:
ကဏ္ဍ ကမ္ဘာကျော်များ, အမျိုးသမီးရေးရာ
ပြည်သု့လွှတ်တော် ဥက္ကဌ ဦးဝင်းမြင့် ဘယ်လို ဖြတ်သန်း ခဲ့ရသလဲ
ဓနုဖြူက ဆန်စက်ပိုင်ရှင် သမီး... နိုင်ငံရေး သမား ဦးဝင်းမြင်နဲ့ ရေစက် ပါပြီး စက်လဲကုန်၊ အိမ်ပါ ရောင်းပြီး ကြမ်းတမ်းတဲ့ ဘဝကို ချို့ချို့တဲ့တဲ့နဲ့ အပြုံးမပျက် အန်ကယ့် ဘေးမှာ မြဲမြဲရပ်၊ အားပေး ခဲ့တယ်။ ပါရမီဖြည့်ဖက် စစ်စစ်။
သိပ်ချစ်ရတဲ့ သားငယ် ဆုံးတော့ လင်ယောက်ျားက ထောင်ထဲမှာ။ ယောကျာ်း လုပ်သူ ကလဲ အဲ့အချိန် ထောက်လှမ်းရေးက
ဦးဝင်မြင့်...ခင်ဗျားသား ဆေးရုံမှာ အသည်း အသန် ဖြစ်နေတယ်၊ ခင်ဗျားသွားတွေ့ မလား လွှတ်ပေးမယ် ၊ဒါပေမဲ့ လက်မှတ်တော့ ထိုးရမယ်၊ နောက်နိုင်ငံရေး ဘယ်တော့မှ မလုပ် ရတော့ဘူး ဆိုတော့ ခေါင်းခါ ခဲ့တယ်။
အသုဘတောင် လိုက်မပို့ ခဲ့ရဘူး။
ရန်ကုန်မှာ တိုက်ခန်း ငှါးနေတယ်၊ စစ်ထောက်လှမ်း ရေးက အိမ်ရှင်ကို ပြဿနာ ရှာတော့ သူလည်း မထားရဲ မောင်းချတယ်။
ဟိုပြေးဒီပြေးနဲ့၊ နောက်ဆုံး တစ်ဦးတည်း ကျန်တဲ့ သမီးလေးကိုပါ ဒုက္ခရောက်မှာ စိုးလို့ ပြည်ပမှာ သွား အလုပ် လုပ်ခိုင်းပြီး သားသမီးနဲ့ပါ ခွဲနေ ခဲ့ရတယ်။
ကြားဖြတ်မှာ အမတ်ဖြစ်တော့မှ ပြန်လာ ခဲ့ရတာ။ အဲ့လို ဘဝတွေ ကြမ်းခဲ့ ရတယ်။
ဒါတောင် ခုအန်ကယ်က တာဝန်ကြီး လာပြီဆိုတော့ အနားမှာ နေပြီး အန်ကယ် မအိပ်မချင်း အလုပ်လုပ် နေသရွေ့ အနားကနေ ယပ်ခပ်ပေးရမဲ့ ဘဝက ကျွတ်မှာမဟုတ်။
credit Ko Zaw Latt
Originally published at - https://www.facebook.com/thuya.aung.794
မျှဝေသူ Te Tee မှာ Wednesday, February 03, 2016 No comments:
အသက်ကြီးပေမယ့် မပျက်ဆီးသေးတဲ့ ဂျော့ခ်ျဆိုရော့စ်
ဂျော့ခ်ျဆိုရော့စ်သည် ကမ္ဘာပေါ်တွင် အအောင်မြင်ဆုံး ငွေကြေး ကုန်သည်ဖြစ်သည် (ဓာတ်ပုံ – Reuters)
ပြီးခဲ့တဲ့ ဩဂုတ်လတုန်းက အမေရိကန် သူဌေးကြီး ဂျော့ခ်ျဆိုရော့စ် (George Soros) အသက် ၈၅ နှစ်ပြည့်ခဲ့သည်။ လန်ဒန်မြို့ရှိ Victoria and Albert ပြတိုက်တွင် မွေးနေ့ အကြိုပွဲ တခုကို ကျင်းပခဲ့ရာ ရင်းမြှုပ်နှံမှု ဈေးကွက်မှ ကြိုပွိုင့် ထောက်ပံ့ငွေ မန်နေဂျာများ (hedge-fund managers) နှင့် ၎င်းတို့၏ လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များ တက်ရောက်ခဲ့ကြသည်။
တက်ရောက် လာသူများက အင်္ဂလန်ဘဏ် (Bank of England) ကို ပြိုလဲစေ ခဲ့သူဖြစ်သည့် ဂျော့ခ်ျဆိုရော့စ် အတွက် ဆုတောင်း ဂုဏ်ပြု ပေးခဲ့ကြသည်။ ၁၉၉၂ ခုနှစ် တွင်
ဂျော့ခ်ျဆိုရော့စ်က စတာလင်ပေါင်ငွေကြေးနှင့် ယှဉ်ပြိုင်၍ အလောင်း အစားပြု စွန့်စား ခဲ့ရာတွင် အောင်မြင်ခဲ့သူ ဖြစ်သည်။ သူ့ထက် နှစ် ၄၀ ခန့် ငယ်သည့် သူ၏ တတိယမြောက် ဇနီးသည် တမီကို ဘောလ်တန် (Tamiko Bolton) ကတော့ လွန်ခဲ့သော ၂ နှစ် သူတို့ မင်္ဂလာဆောင် ခဲ့စဉ်ကအတိုင်း ကြည့်လို့ ကောင်းနေ ဆဲဖြစ်သည်။
အသက် ၈၅ နှစ် အရွယ်ရှိပြီ ဖြစ်သောကြောင့် ဂျော့ခ်ျဆိုရော့စ် အလုပ်လု ပ်ရာမှာ အတော်လေးနှေးကွေး သွားပြီဟု ထင်လျှင် မှားပါလိမ့်မည်။ သူ၏ အသားတင် ကြွယ်ဝမှုသည် အမေရိကန် ဒေါ်လာ ၂၄.၂ ဘီ လီယံ ရှိမည်ဟု Forbes က ခန့်မှန်းထားပြီး အမေရိကန်၏ အချမ်းသာဆုံး ပုဂ္ဂိုလ်များ စာရင်းတွင် အမှတ်စဉ် ၂၇ ၌ ရှိနေပါသည်။
နောက်ပိုင်းတွင် Quantum Group of Funds ဟု အမည်ပြောင်းခဲ့သည့် သူ၏ ကိုယ်ပိုင် ငွေကြေးရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု လုပ်ငန်းကို အရင်းအနှီး အမေရိကန် ဒေါ်လာ ၁၂ သန်းဖြင့် ၁၉၆၉ ခုနှစ်တွင် နယူးယောက်မြို့၌ စတင်တည်ထောင်ခဲ့ပြီး လျှင်လျှင်မြန်မြန် တိုးတက်လာခဲ့သည်။ အလှူဒါနပြုလုပ်ခဲ့သည်မှာလည်း ယခုအခါ အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၁၅ ဘီလီယံရှိနေပြီ ဖြစ်သည်။
ဂျော့ခ်ျဆိုရော့စ်သည် ကမ္ဘာပေါ်တွင် အအောင်မြင်ဆုံး ငွေကြေးကုန်သည်ဖြစ်သော်လည်း (သူက “ကြောင်းကျိုးဆက်စပ်နိုင်မှု” ဟုခေါ်သည့်) သူ၏ ဘ၀နှင့် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု အတွေးအခေါ်များကြောင့် လူအများက ပိုသိကြသည်။ အခွင့်အရေး ပေါ်လာသည်နှင့် မြန်မြန်ဆန်ဆန် လှုပ်ရှားသည့်အတွက် သူ့ ပြိုင်ဘက်များကို မျက်ခြေဖြတ်နိုင်ခဲ့သည်။
“အများစု သိထားကြတာက ဈေးကွက်တွေဟာ အမြဲမှန်တယ်တဲ့။ ကျနော်ကတော့ ဆန့်ကျင်ဘက်မှာ နေတယ်။ ကျနော်က ဈေးကွက်တွေက အမြဲမှားတယ်လို့ ယူဆလိုက်တယ်” ဟု သူက ပြောသည်။ ဈေးကွက်များသည် မှန်ကန်လေ့ရှိသော်လည်း အခြေအနေအချို့တွင် အမှားအယွင်းများကို ပြင်ဆင်သည့်အချိန်တွင် စိတ်လှုပ်ရှားစရာ အပြောင်းအလဲကို သူက ကြိုမြင်နိုင်ခဲ့သည်။ “ဈေးကွက်က ဘာမှားနေသလဲဆိုတာ မသိတဲ့အချိန်မှာ အဲဒီအမှားကို ကျနော်က သိတယ်။ ဆိုတော့ ကျနော်က ရှေ့ကြိုရောက်နေတာပေါ့” ဟု ဂျော့ခ်ျဆိုရော့စ်က ပြောသည်။
ဂျော့ခ်ျဆိုရော့စ်၏ သားဖြစ်သော ရောဘတ်ဆိုရော့စ် (Robert Soros) ကမူ သီအိုရီများက အရေးမကြီးကြောင်း၊ သူ၏ ဖခင်သည် ဈေးကွက်အတွင်းတွင် သူ၏ အနေအထားကို အလိုအလျောက်ဖြစ်ပေါ်လာသည့် စေ့ဆော်မှုဖြင့် အပြောင်းအလဲ ပြုလုပ်ခြင်းဖြစ်သည်ဟု ဆိုသည်။ မည်သည့်အတွက်ကြောင့် ဆိုသည်ကို သက်သေပြစရာလည်း မရှိကြောင်း၊ ပင်ကိုယ် ဗီဇစိတ်ကိုသာ အများဆုံး အားပြုခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်း ပြောသည်။ ရောဘတ်ဆိုရော့စ်သည် Soros Fund Management ၏ ဒုတိယ ဥက္ကဌဖြစ်သည်။
ဂျော့ခ်ျဆိုရော့စ်က တခြားငွေကြေးကုန်သည်များနှင့် အယူအဆ ရပ်တည်ချက် ကွဲပြားခြားနားသူ ဖြစ်သည်။
အခွန်ငွေ ဆိုင်းငံ့ပေးခြင်း အစီအစဉ်များ၊ အခြားနိုင်ငံများမှ ဝင်ငွေများ၊ အလွန်စမတ်ကျသော ဝါဏိဇ္ဇစနစ်တို့၏ အားသာချက်ကို ရရှိနေသည့် အချိန်တွင်ပင် ဂျော့ခ်ျဆိုရော့စ်က ချမ်းသာကြွယ်ဝသူများ အခွန် ပိုမိုပေးဆောင်ရမည့် အကြောင်း၊ လူ ၉၉ ရာခိုင်နှုန်းကို အသုံးပြုပြီး ၁ ရာခိုင်နှုန်းသာ ချမ်းသာကြွယ်ဝမှု တိုးနေသည့် အမေရိကန်၏ ပုံစံကို လက်မခံနိုင်ကြောင်း၊ လွတ်လပ်သော ဈေးကွက်များသည် ပြင်ပအကူအညီမလိုဘဲ ၎င်းတို့ဖာသာ ကုစားနိုင်သည် ဟူသော ဈေးကွက်သည်သာ အရာရာဟု ယုံကြည်ထားသူများသည် ၂၀၀၈ ခုနှစ်ငွေကြေး အကြပ်အတည်းများ ဖြစ်ပေါ်စေခဲ့ပြီး အလားတူဖြစ်ရပ်များနှင့် ရင်ဆိုင်ရဖွယ် ရှိကြောင်း စွဲဆောင်နိုင်စွမ်း အပြည့်ဖြင့် ရှင်းလင်းပြောဆိုခဲ့သည်။ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူ၏ အလေ့အထက ဈေးကွက်ကို အတက်မှာ အရှိန်ပြင်းပြင်းတက်စေနိုင်သလို ကျချိန်မှာလည်း ပြိုကွဲပျက်စီးစေနိုင်သည်။
ဗီဇပါရမီကြောင့်ဖြစ်စေ၊ သီအိုရီကြောင့်ဖြစ်စေ ဂျော့ခ်ျဆိုရော့စ်သည် ကမ္ဘာပေါ်တွင် အကျော်ကြားဆုံး ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများ ထဲမှ တဦးဖြစ်ပါသည်။ Hedge-fund manager လုပ်ငန်းတခုတည်းကပင် သူ၏ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများအတွက် အမေရိကန် ဒေါ် လာ ၄၀ ဘီလီယံ ရှာဖွေပေးနိုင်ခဲ့ခြင်းကြောင့် ဖြစ်နိုင်ပါသည်။ စီးပွားရေး သတင်းနှင့် ဈေးကွက် လေ့လာ စောင့်ကြည့်ရေး ၀က်ဘ်ဆိုက်တခုဖြစ်သည့် Market Watch ၏ အဆိုအရ ဂျော့ခ်ျဆိုရော့စ်၏ Quantum fund သည် အခြား Hedge funds များထက် ၀င်ငွေ ပိုမိုရရှိခဲ့သည်ဟု သိရသည်။ ၂၀၁၃ ခုနှစ်တွင် အသားတင် အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၅.၅ ဘီလီယံ ရရှိခဲ့သဖြင့် အခြားသူများထက် သာလွန်ခဲ့သည်။
ပရဟိတလုပ်ငန်းတွင်လည်း ဈေးကွက်မှာကဲ့သို့ပင် ဂျော့ခ်ျဆိုရော့စ်က ဒဿနနှင့် ပင်ကိုယ်သိစိတ်ကို ပူးပေါင်း၍ ဦး ဆောင်ခဲ့သည်။ သူ၏ ဖောင်ဒေးရှင်းဖြစ်သော Open Society က ဒီမိုကရေစီ သဘောတရားများဖြစ်သော လွတ်လပ်စွာ ထုတ်ဖော်ပြောဆိုခွင့်၊ လူ့အခွင့်အရေးကို လေးစားမှု၊ လွတ်လပ်စွာ ကွဲပြားခွင့်၊ လွတ်လပ်စွာ တရားစီရင်ရေး၊ ရွေးကောက်ခံ အစိုးရနှင့် ဈေးကွက် စီးပွားရေးများက ကမ္ဘာတွင် အကောင်းဆုံးဖြစ်သည် ဆိုသော ဂျော့ခ်ျဆိုရော့စ်၏ အခြေခံ ယုံကြည်မှုများ အတိုင်း ဆောင်ရွက်နေသည်။
ဂျော့ခ်ျဆိုရော့စ်က သူ့ကိုယ်သူ မအောင်မြင်သော အတွေးအခေါ် ပညာရှင်တဦး အဖြစ် ပြောသည့် အချိန်များလည်း ရှိခဲ့ဖူးသည်။ သို့သော်လည်း ၁၉၉၃ ခုနှစ်တွင် သူက ရန်သူဝိုင်းရံထားခြင်းခံနေရသည့် ဘော့စနီးယား၊ ဟာဇီဂိုဗီးနား မြို့တော် ဆာရာဂျေဗို (Sarajevo) မြို့မှ ပြည်သူများအတွက် သောက်သုံးရေ ပေးနိုင်ရန် အမေရိကန် ဒေါ်လာ သန်း ၅၀ လှူဒါန်းခဲ့သည်။
ထိုသို့ ဆောင်ရွက်ရန် ဆုံးဖြတ်ခဲ့ခြင်းမှာ သူ၏ ပင်ကိုယ်ဗီဇ စိတ်၏ လှုံ့ဆော်မှုကြောင့် ဖြစ်သည်။ Open Society ဖောင်ဒေးရှင်းတွင် နှစ်ပေါင်း ၂၀ နီးပါး လုပ်ကိုင်ခဲ့ဖူးသူ Aryeh Neier က ၎င်းတို့၏ ဆောင်ရွက်မှုများက ရုတ်တရက် ပေါ်ပေါက်လာလေ့ရှိသည်ဟု တွေ့ဆုံ မေးမြန်းခန်း တခုတွင် ပြောကြားခဲ့သည်။ အခြားဖောင်ဒေးရှင်းများကဲ့သို့ မဟုတ်ဘဲ သူတို့တွင် ဦးတည်ရာကို အလျှင်အမြန် ပြောင်းလဲနိုင်စွမ်းရှိသည်ဟုလည်း ဆိုသည်။
ဂျော့ခ်ျဆိုရော့စ်နှင့် သူ၏ အဆင့်မြင့် ပညာတတ် ၀န်ထမ်းများက သူ၏ စိတ်ကူးများကို ပြန့်နှံ့စေခဲ့သည်။ သူ၏ ဖောင်ဒေးရှင်းများကို နိုင်ငံပေါင်း ၁၀၀ ခန့်တွင် ဖြန့်ကျက်ထားသည်။ ကျမ လတ်တလော ရေးသားခဲ့သော BuyingaBetter World: George Soros and Billionaire Philanthropy အမည်ရှိ စာအုပ်သည် မြန်မာနိုင်ငံမှသည် ပိုလန်အထိ၊ လိုင်ဘေးရီးယားမှသည် နိုင်ငံတကာ ရာဇ၀တ်မှု တရားရုံး အထိ ဂျော့ခ်ျဆိုရော့စ်၏ ပရဟိတလုပ်ငန်းများ မည်သို့ သက်ရောက်မှု ရှိစေခဲ့သည်ကို တိုင်းတာပြရန် အားထုတ်ခဲ့ခြင်း ဖြစ်ပါသည်။
ယခုအချိန်တွင်အသက် ၈၅ နှစ် အရွယ်ရောက်ခဲ့ပြီ ဖြစ်သော်လည်း ဂျော့ခ်ျဆိုရော့စ်က အနားယူခြင်း နည်းပါးသည်။
ဥရောပသမဂ္ဂ အနေဖြင့် လက်ရှိ အခက်အခဲများမှ လွတ်မြောက်နိုင်ရေး ရွေးချယ်စရာ အများအပြားကို သူက အဆိုပြုပေးခဲ့သည်။ အပျက်အစီးများပြားလှသည့် ကမ္ဘာစစ်ပွဲ ၂ ခုမှ ရုန်းထွက်နိုင်ရေး ရှေ့ကို မျှော်မြင်တတ်သည့် နိုင်ငံခေါင်းဆောင်များ စုစည်းခဲ့သည့် အဖွဲ့တွင် ဗျူရိုကရက်များ ကြီးစိုးနေသည်ကိုလည်း သူက ဝေဖန် ခဲ့သည်။ လက်ရှိ အခြေအနေတွင် ဥရောပသမဂ္ဂက မြီရှင်များနှင့် မြီစားများ ဟူ၍ ၂ ပိုင်း ဖြစ်နေသည်။
သူရေးသားခဲ့သော The Tragedy of the European Union: Disintegration or Revival? အမည်ရှိ စာအုပ်ထုတ်ဝေချိန်တွင် ဥရောပသမဂ္ဂ၏ ပြဿနာများကို အခင်အမင်မပျက် ဖြေရှင်းနိုင်မည့် နည်းလမ်းတခု အတွက် အလားအလာများက မှေးမှိန်နေခဲ့ပြီ ဖြစ်သည်။ ၀မ်းနည်းစရာကောင်းသည်မှာ ဂျာမန် အဓိပတိ အန်ဂျလာမာကဲလ်က သူ့ကို နားမလည်ခဲ့သလို သူပြောတာကိုလည်း နားထောင်ခြင်းမရှိခဲ့ဟု ဂျော့ခ်ျဆိုရော့စ်က ကျမကို ပြောပါသည်။
မကြာသေးမီက Financial Times သတင်းစာတွင် ဥရောပ၏ ဒုက္ခသည် အကျပ်အတည်းနှင့် ပတ်သက်၍ ဂျော့ခ်ျဆိုရော့စ်က While Failing To Help Refugees, Europe Fails Itself အမည်ဖြင့် ဆောင်းပါး တပုဒ် ရေးသားခဲ့သည်။ ဒုက္ခသည် ပြဿနာနှင့် ပတ်သက်၍ အားလုံးပါဝင်နိုင်သည့် အစီအစဉ် တခု ဥရောပသမဂ္ဂတွင် ရှိမနေခဲ့ပါ။ ထို့ကြောင့် အဖွဲ့ ၀င်နိုင်ငံများသည် ခိုလှုံခွင့်တောင်းခံလာသူများအတွက် ကိုယ်ပိုင်နည်းလမ်းများဖြင့် ဖြေရှင်းဖို့ ဖြစ်လာရသည်။ ပြင်သစ်နှင့် သြစတြီးယားတို့က နိုင်ငံကူးလက်မှတ်ဖြင့် ထိန်းချုပ်ခြင်းကို ပြန်လည်လုပ်ကိုင်လာပြီး ဟန်ဂေရီက ခြံစည်းရိုးတခု ကာရံနေသည်ဟု သူက ပြောသည်။
ဂျော့ခ်ျဆိုရော့စ်က ဂရိနိုင်ငံသို့လည်း health and solidarity စင်တာများမှတဆင့် ငွေကြေးထောက်ပံ့မှုများ တိုးချဲ့ပေးခဲ့သည်။ အဆိုပါ စင်တာများသည် ကျန်းမာရေး စောင့်ရှောက်မှုနှင့် ဥပဒေရေးရာ အကြံပေးမှုများ ပြုလုပ်နေသည့် အဖွဲ့များ ဖြစ်သည်။ နိုင်ငံရပ်ခြားတွင် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများ ရှိနေသည့် ဂရိလုပ်ငန်းရှင် သူဌေးကြီးများက ၎င်းတို့၏ နိုင်ငံသားများကို ကူညီရန် ဂျော့ခ်ျဆိုရော့စ်၏ နမူနာများအတိုင်း လိုက်လံလုပ်ဆောင်ကြခြင်း မရှိသည်က ၀မ်းနည်းဖွယ်ရာဖြစ်သည်။ သို့သော်လည်း အကယ်၍ သူတို့ ထိုနည်းအတိုင်းလိုက်ခဲ့သည်ဆိုလျှင်ပင် ပမာဏ အလွန်နည်းပါးနိုင်ပြီး အလွန်နောက်ကျနေပြီ ဖြစ်သည်။
ယူကရိန်းနိုင်ငံကို စီးပွားရေးအရရော နိုင်ငံရေးအရပါ ထောက်ပံ့ရန်လည်း သူက တိုက်တွန်းခဲ့သည်။ “တကယ်လို့ ယူကရိန်း တိုးတက်လာပြီဆိုရင် သူတို့ရဲ့ ပြဿနာတွေကို ရုရှားသမ္မတ ပူတင်က လုပ်နေတာ၊ အနောက်နိုင်ငံတွေကြောင့် မဟုတ်ဘူးဆိုတာ အဖြေပေါ်လာလိမ့်မယ်” ဟု ဂျော့ခ်ျဆိုရော့စ်က ပြောသည်။ သူပြောသည့်အတိုင်းလည်း သူက ငွေကြေးသုံးစွဲခဲ့သည်။ ယူကရိန်းနိုင်ငံသို့ သူ၏ International Renaissance Foundation မှတဆင့် ဒေါ်လာသန်းချီ ပေးခဲ့သည်။
အနောက်နိုင်ငံများက ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု အခြေအနေများ ပိုမိုကောင်းမွန်လာအောင် အကူအညီပေးခဲ့လျှင် ယူကရိန်းနိုင်ငံတွင် အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၁ ဘီလီယံ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသွားမည်ဟု ဂျော့ခ်ျဆိုရော့စ်က မတ်လကုန်ပိုင်းတွင် ကြေညာခဲ့သည်။
ဆိုဗီယက်ပြည်ထောင်စု ပြိုကွဲသွားခဲ့ပြီးသည့် အချိန်ကလည်း ရုရှားနိုင်ငံကို အလားတူ အကူအညီမျိုးပေးရန် သူက တိုက်တွန်းခဲ့ဖူးသည်။
ကျမ ပြုလုပ်ခဲ့သည့် တွေ့ဆုံမေးမြန်းမှုတခုတွင် ဆိုဗီယက်ပြည်ထောင်စုဟောင်းနှင့် ရုရှားနိုင်ငံတွင် သူကြိုးစားကြည့်ခဲ့သည့် ကဏ္ဍအကြောင်းကို ဂျော့ခ်ျဆိုရော့စ်က ပြောပြခဲ့သည်။ သူ၏ နှစ်လိုဖွယ်ရာကောင်းသော အလေ့အထများထဲမှ တခုမှာ သူ၏ စိတ်ပျက်မှုများနှင့် ကျရှုံးမှုများကို ဖုံးကွယ်မထားတတ်ခြင်း ဖြစ်သည်။ ဥပမာ ပြရလျှင် ရုရှားနိုင်ငံဖြစ်သည်။
“စိတ်မကောင်းစရာပါပဲ။ ဒီမိုကရေစီ ရွေးကောက်ပွဲတွေက ပွင့်လင်းလွတ်လပ်တဲ့ အဖွဲ့အစည်းတွေကို ယူဆောင်မလာဘူး။ ဆန့်ကျင်ဘက်ကိုပဲ ယူလာနိုင်ခဲ့တယ်” ဟု သူကပြောသည်။
Asia Society က ဦးစီး၍ မေလအတွင်းကပြုလုပ်ခဲ့သည့် “When Societies Open” အမည်ရှိ အခန်းအနားတွင် ဂျော့ခ်ျဆိုရော့စ်နှင့် အခန်းအနားကြီးကြပ်သူ Orville Schell တို့က ဂျော့ခ်ျဆိုရော့စ်၏ Open Society ဖောင်ဒေးရှင်းများက တက်တက်ကြွကြွ အကူအညီများပေးနေသည့် နိုင်ငံပေါင်း ၁ ဒါဇင်ခန့်မှ ဒီမိုကရေစီ အသွင်ကူးပြောင်းရေးများ အကြောင်း ပြောခဲ့ကြသည်။ “အခွင့်အရေး တံခါးတွေ ရှိပါတယ်။ အဲဒီဟာတွေ ဖွင့်တဲ့ အချိန်မှာ ခင်ဗျား ၀င်သွားချင်မှာပဲ” ဟု ဂျော့ခ်ျဆိုရော့စ်က ပြောသည်။
မြန်မာနိုင်ငံသည် ထိုသို့သော နေရာတခု ဖြစ်သည်။ Open Society က စစ်အစိုးရ၏ ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးအတွက် တွန်းအားပေးရာတွင် အဓိကနေရာမှ ပါဝင်ခဲ့သလို နိုဘယ်ငြိမ်းချမ်းရေးဆုရှင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကိုလည်း နေအိမ် အကျယ်ချုပ်ဖြင့် ရှိနေစဉ် ထောက်ခံခဲ့သည်။ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို နေအိမ် အကျယ်ချုပ်မှ ပြန်လွှတ်ပေးပြီး စစ်တပ်က ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးများ မပြုလုပ်မီ အချိန်အထိ Open Society က အစိုးရမဟုတ်သည့် အဖွဲ့အစည်းများကို အထောက်အပံ့ ပေးခဲ့သည်။
လူ့အခွင့်အရေး ဆောင်ရွက်မှုများကို မှတ်တမ်းတင်နိုင်ရေးအတွက် အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၁၀ သန်းကျော် သုံးစွဲခဲ့ပြီး အကူအညီများပေးရန် နိုင်ငံတကာ ငွေကြေးရန်ပုံငွေ အဖွဲ့ (IMF) နှင့် ကမ္ဘာ့ဘဏ်တို့ကို တောင်းဆိုခဲ့သည်။ ၀မ်းနည်းဖွယ်ရာ ကောင်းသည်မှာ လူမျိုးရေးအရ တိုက်ခိုက်ခံနေရသည့် လူနည်းစုများနှင့် တိုးပွားလာသည့် ဒုက္ခသည်များကို အကူအညီ ပေးရန် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် များများစားစား မလုပ်နိုင်ခဲ့ပါ။
၂ ပတ် တကြိမ်ထုတ် The New York Review of Books မဂ္ဂဇင်းတွင် ဇူလိုင်လက ရေးသားခဲ့သော အက်ဆေးတပုဒ်၌ ဂျော့ခ်ျဆိုရော့စ်က အမေရိကန် နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဟောင်း ဟင်နရီကစ်ဆင်းဂျား သတိပေးခဲ့သော မလွှဲရှောင်နိုင်သည့် တရုတ်-အမေရိကန် ပဋိပက္ခနှင့် ပတ်သက်၍ ပဲ့တင်ထပ်ဖော်ပြခဲ့သည်။ “အမေရိကန်နဲ့ တရုတ်နိုင်ငံကြားက ပြိုင်ဆိုင်မှုက ရှောင်လွှဲလို့ မရပါဘူး။
ဒါပေမယ့် စည်းကမ်းဘောင်တွေထဲမှာပဲ ရှိအောင် ထိန်းသိမ်းနိုင်ဖို့ လိုပါတယ်။ ဒါမှလည်း စစ်အင်အား သုံးစွဲရတဲ့ အခြေအနေ ဖြစ်မလာအောင် တားဆီးနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်” ဟု သူက ပြောသည်။ အမေရိကန်နှင့် တရုတ် နိုင်ငံကြားတွင် နီးကပ်သော ဆက်ဆံရေးရှိရန်လည်း တောင်းဆိုခဲ့သည်။ အနောက်တိုင်းနှင့် နီးကပ်အောင် အားထုတ်ခဲ့သည့်အတွက် တရုတ် သမ္မတ ရှီကျင်ဖျင့်ကို လေးစားကြောင်းလည်း ပြောသည်။ တရုတ်နိုင်ငံ၏ ဆိုးရွားသော လူ့အခွင့်အရေးဆိုင်ရာ မှတ်တမ်းနှင့် အစိုးရ၏ ပုံစံတို့က ဂျော့ခ်ျဆိုရော့စ်၏ စိတ်ကူးဖြစ်သော သည်းခံပြီး ပွင့်လင်း လွတ်လပ်သည့် အဖွဲ့အစည်းကိစ္စကို မထိခိုက်စေခဲ့ပါ။
အမေရိကန်နိုင်ငံတွင် သူ့ကို လက်ဝဲယိမ်းသည့် လစ်ဘရယ်တယောက်အဖြစ်မြင်ကြပြီး ရီပတ်ပလစ်ကင်တို့က အလွန် အန္တရာယ်ကြီးသူတယောက်ဟု ယူဆထားကြသည်။ “ရိုးရာအစွဲအလမ်းရှိတဲ့ အမေရိကန်တွေအတွက်တော့ ဂျော့ခ်ျဆိုရော့စ်က ပြည်သူ့ ရန်သူ နံပါတ် ၁ ပဲ။” ဟု Fox News ရုပ်သံလိုင်းမှ Bill O’Reilly က အစီအစဉ်တခုတွင် ပြောကြားခဲ့သည်။
ဂျော့ခ်ျဆိုရော့စ်က အမေရိကန် နိုင်ငံတွင်းထက် နိုင်ငံ ပြင်ပသို့ အများဆုံး အာရုံစိုက်သွားသည်ကို ကျမနှင့် တွေ့ဆုံမေး မြန်းခဲ့သည့် အမေရိကန်နိုင်ငံသားများက အံ့သြနေသည့်ပုံရပါသည်။
သို့သော် အမေရိကန်နိုင်ငံတွင် Black Male Achievement လှုပ်ရှားမှု (အာဖရိက နွယ်ဖွား အမေရိကန် ယောက်ျားများ လူမှုရေး၊ စီးပွားရေး၊ ပညာရေးနှင့် နိုင်ငံရေးတွင် ပိုမို ပါဝင်လာ ရေး လှုပ်ရှားမှု)၊ Institute-Baltimore (ကလေးငယ်များ ကျောင်းတက်နိုင်ရေး၊ မူးယစ်ဆေးစွဲသူများ ဆေးဝါးကုသခွင့် ရရှိရေး၊ ရာဇ၀တ်မှုလျော့ကျရေးနှင့် တရားစီရင်ရေး စနစ်များ ပိုမိုထိရောက် ကောင်းမွန်လာရေး ဆောင်ရွက်နေသည့် အဖွဲ့ အစည်း)၊ Project on Death in America (သေလုမျောပါး လူနာများကို စောင့်ရှောက်ရေး၊
စောင့်ရှောက်မှုပေးရာတွင် ကြုံတွေ့ရသည့် အတားအဆီးများနှင့် ပတ်သက်၍ သုတေသနပြုနေသည့် လူပုဂ္ဂိုလ်များ အဖွဲ့ အစည်းများကို ငွေကြေး ထောက်ပံ့သည့် အဖွဲ့အစည်း) နှင့် Drug Policy Alliance (မူးယစ်ဆေးကြောင့်ဖြစ်ရသည့် ရာဇ၀တ်မှုများ ဆန့်ကျင်ရေး၊ မူးယစ်ဆေးဖြတ်သူများ၊ အကြမ်းဖက်ခံရသူများ ထိခိုက်ခံစားရမှုလျော့ကျစေရေး၊ ဆေးဝါးကု သနိုင်ရေး အတွက် ဆောင် ရွက်နေသည့် နယူးယောက် အခြေစိုက် အစိုးရမဟုတ်သော အဖွဲ့အစည်း) များသို့ ဂျော့ခ်ျဆိုရော့စ်က ငွေကြေးထောက်ပံ့သည်။
၂၀၀၄ ခုနှစ်တွင် ဂျော့ဘုရှ် ဒုတိယအကြိမ် သမ္မတတာဝန် ပြန်လည်မရယူနိုင် အောင် အခြားဘီလီယံနာတဦးနှင့် ပူးပေါင်း၍ ရန်ပုံငွေတရပ် ထူထောင်ပေးခဲ့သော်လည်း အောင်မြင်မှု မရရှိခဲ့ပါ။ သမ္မတ ဘားရက်အိုဘားမား၏ မဲဆွယ် လှုပ်ရှားမှုများအတွက်လည်း ငွေကြေးလှူဒါန်းခဲ့ပြီး ယခုအခါတွင် ဟီလာရီကလင်တန်၏ ရွေးကောက်ပွဲ လှုပ်ရှားမှုကို
ရီပတ်ပလစ်ကင် ကိုယ်စားလှယ်လောင်းများ၏ ပြောဆိုမှုများနှင့် လုပ်ဆောင်ချက်များကို တာဝန်ယူစေရန် စောင့်ကြည့်သည့် အဖွဲ့တခုဖြစ်သည့် American Bridge 21st Century သို့လည်း အမေရိကန် ဒေါ်လာ ၁ သန်း လှူဒါန်းခဲ့သည်။
အသက်အရွယ် ကြီးရင့်ပြီဖြစ်သော်လည်း George Soros က ထူးထူးခြားခြားပင် သူ၏ အမွေနှင့် ပတ်သက်၍ ပြောဆိုရန် စိတ်မ၀င်စားသည်ကို တွေ့ရသည်။ အဆိုပါ အကြောင်းအရာများနှင့် ပတ်သက်၍ မေးမြန်းပါက စိတ်ဆိုးတတ်သည်။ သူ၏ နာမည်ဖြင့် အဆောက်အဦးများ၊ ကျောင်းများ ဆောက်လုပ်ရန်လည်း ဘယ်တုန်းကမျှ ဆန္ဒမရှိခဲ့ပါ။
သူ၏ အသက် ၈၅ နှစ်ကျော်သွားသည့် အချိန်တွင်လည်း သူက နိုင်ငံများနှင့် စိတ်ကူး အတွေးအခေါ်များကြားတွင် ယခင်ကအတိုင်း သွက်သွက်လက်လက် ရှင်သန်လှုပ်ရှားနေဦးမည် ဖြစ်သည်။ ဘီလီယံနှင့် ချီသော ငွေကြေးများကို ရှာဖွေရင်း သူ၏ ဒဿနများကို ပြန့်ပွားအောင်လုပ်ပေးနေသူများသို့လည်း သူပိုင်ငွေကြေးများကို ဆက်လက်လှူဒါန်းနေလိမ့်ဦးမည် ဖြစ်ပါသည်။
( Anna Porter ၏ In business and beyond, George Soros barely stops for breath ကို နိုင်မင်းသွင် ဆီလျော်အောင် ဘာသာပြန်ဆိုသည်)
ကနေဒါနိုင်ငံသူ အန်နာပေါ်တာသည် “BuyingaBetter World: George Soros and Billionaire Philanthropy” အပါအ၀င် စာအုပ် အမြောက်အများ ရေးသားခဲ့သည့် စာရေးဆရာမ တဦးဖြစ်ပါသည်။
Original link - http://burma.irrawaddy.org/business/2015/09/26/95472.html
မျှဝေသူ Te Tee မှာ Saturday, September 26, 2015 No comments:
ကဏ္ဍ ကမ္ဘာကျော်များ, ဘာသာပြန်
စတိဗ်ဂျော့ကို အသည်းနှလုံး မရှိသူလို့ ထပ်ပြလိုက်တဲ့ ရုပ်ရှင်
Job အမည်ရ ရုပ်ရှင် ထွက်ရှိ ခဲ့ဖူး သလို ယခုလည်း မကြာမီ ရုံတင် တော့မယ့် Steve Job ရုပ်ရှင်တစ်ကား ရှိပါတယ်။ ယင်း ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကား နှစ်ကား စလုံးရဲ့ ဖော်ပြမှုများဟာ စတိဗ်ဂျော့ဟာ အသည်းမရှိ၊ ရက်စက်သူ အဖြစ် ပြသထားမှုကို မြင်ရ ပါလိမ့်မယ်။
သမီး လီဆာကို သမီး မဟုတ်ကြောင်း ထပ်ခါ ထပ်ခါငြင်းပြီး ရှောင်ဖယ် ခဲ့မှုက တစ်မှု၊ နောက်တစ်မှုက ငယ်ပေါင်း ဘော်ဒါရင်း Wozniak တီထွင်တဲ့ ကွန်ပြူတာကို ၇၀၀၀ နဲ့ ရောင်းပြီး ၅၀၀ ပဲရတယ်လို့ လိမ်လည် ညှပ်ချခဲ့မှု ဖြစ်ပါတယ်။
Wozniak ဟာ သူ့ရဲ့ ငယ်ပေါင်း သူငယ်ချင်း ဖြစ်ပြီး Apple ကုမ္ဗဏီရဲ့ နောက်ကွယ်မှာ အဓိက run ပေးတဲ့ သူတစ်ဦး အဖြစ်လည်း ပါဝင် ခဲ့ပါတယ်။ နောက် တစ်ခုကတော့ ဘီလ်ဂိတ်နဲ့ စတိဗ်ဂျော့ရဲ့ ဆန့်ကျင်ဘက် အယူအဆ ဖြစ်ပါတယ်။ ငွေဆိုတာကို မမက်မောတာချင်း တူပေမယ့် ဘီလ်ဂိတ်ဟာ သူ့ငွေကို လှူဒါန်းမှု ထဲမှာ အများဆုံး အသုံးပြုပေမယ့် စတိဗ်ဂျော့ ကတော့ အလှူအတန်း လုပ်တယ်ဆိုတာ အချိန်အလဟသ ကုန်ဆုံးစေခြင်း တစ်ခုဖြစ်ကြောင်း comment ပေးခဲ့ ဖူးပါတယ်။
အစရှိသဖြင့် စတိဗ်ဂျော့ရဲ့ ရက်စက်မှုများကို အသားပေး ဖော်ပြမှုများကို ရုပ်ရှင်မှာ မြင်တွေ့ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
ဒီတော့ ယင်း ရုပ်ရှင် ဇာတ်ကားများဟာ Steve Job ကို ဂုဏ်တက်စေဖို့လား ပိုပြီးတော့ ကြောက်စရာ Monster တစ်ကောင်ဖြစ်စေ ဖို့လား ဆိုတာ မသဲကွဲ သလို ဖြစ်လာ ပါတယ်။
Original link - http://www.myanmarmobileapp.com/2015/09/18/stevejob/
မျှဝေသူ Te Tee မှာ Sunday, September 20, 2015 No comments:
အသက် ၄၀ ကျော်မှ ထူးခြားအောင်မြင် လာသည့် ကမ္ဘာကျော်များ
ဘ၀မှာ အသက် ၂၀ အရွယ် ကနေ ၃၀ ရောက်လာတဲ့ အချိန်မှာ အောင်မြင်မှု တခုခုတော့ ရရမယ်လို့ တွေးထား ဖူးသူတွေ ချည်းပါပဲ။ အဲဒီ အချိန်ရောက်လို့မှ ဘာမှဖြစ် မလာခဲ့ဘူး ဆိုရင်တော့ စိုးရိမ် ပူပန်မှုတွေ ရှိတတ် ကြပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အခြား တဘက်က အောင်မြင်မှု ရခဲ့ကြ သူတွေလည်း ဒုနဲ့ ဒေးပါပဲ။ အသက် ၄၀ ကျော်မှ ထူးထူး ခြားခြား အောင်မြင်မှု ရခဲ့ ကြတဲ့သူ အယောက် ၂၀ ကို Business Insider အင်တာနက် စာမျက်နှာက တဆင့် ဖော်ပြ လိုက်ပါတယ်။
၃၉ နှစ်ပြည့်မွေးနေ့ ရောက်မှ Fantastic Four ရုပ်ပြကို စတင် ဖန်တီး ခဲ့ပြီး နှစ် အနည်းငယ် အကြာမှာ Marvel Universe အတွက် အမေရိကန်နိုင်ငံ ပြယုဂ်တွေ ဖြစ်တဲ့ ပင့်ကူလူသား၊ အိပ်စ်မန်း စတဲ့ ဇာတ်ကောင်တွေရဲ့ ဖန်တီးရှင် ဖြစ်လာ ခဲ့ပါတယ်။
၁၉၉၂ ခုနှစ်မှာ Curves အမည်ရတဲ့ ကိုယ်ယာယ အားကစား ခန်းမကို စတင် တည်ထောင် ချိန်မှာ အသက် ၄၀ ရှိနေ ခဲ့ပေမယ့် ၁၉၉၀ ပြည့်လွန်နှစ်တွေ နောက်ပိုင်း မှာတော့ လုပ်ငန်း ခွဲပေါင်း များစွာနဲ့ အောင်မြင် ခဲ့ပါတယ်။
စကိတ်စီးမယ်နဲ့ သတင်းသမား ဘ၀ကနေ ဖက်ရှင်လောကကို အသက် ၄၀ မှ စတင် ၀င်ရောက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီး ခုချိန်မှာတော့ အရေးပါတဲ့ ဖက်ရှင်ဒီဇိုင်နာတယောက် ဖြစ်နေပါပြီ။
ဟောလိဝုဒ် ရုပ်ရှင် ဇာတ်ကားပေါင်း များစွာမှာ ပါဝင် သရုပ်ဆောင် ခဲ့ပေမယ့် ၁၉၉၁ ခုနှစ် Jungle Fever ရုပ်ရှင် အတွက် ထူးချွန်ဆု ချီးမြှင့်ခံ ရချိန်မှာ ၄၃ နှစ် ရှိနေပြီ ဖြစ်ပါတယ်။
မိုဒယ်လ် တီ အမျိုးအစား ကမ္ဘာကျော်ဖို့ဒ်ကားကို တီထွင် ဖန်တီး ချိန်မှာ ၄၅ နှစ်ရှိနေပါပြီ။
နာမည်ကျော် ကောင်းဘွိုင် အမှတ် တံဆိပ် Rockmount Ranch Wear ကို ၄၅ နှစ် အရွယ်မှာ စတင် တည်ထောင် ခဲ့ပြီး ၂၀၀၈ ခုနှစ် ကွယ်လွန်ချိန် ၁၀၇ နှစ် အရွယ်ထိ အမှုဆောင် အရာရှိချုပ် အဖြစ် လုပ်ဆောင် ခဲ့ပါတယ်။
ခုချိန်ထိ ဟာသ လူရွှင်တော် အဖြစ် နာမည် ကျော်ကြား နေဆဲ ဖြစ်ပေမယ့် သူဟာ အသက် ၄၆ နှစ်မှာမှ The Ed Sullivan Show ပြဇာတ်နဲ့ အောင်မြင် လာခဲ့ ပါတယ်။
၁၉၅၈ ခုနှစ်၊ သူ့အသက် ၄၈ နှစ်မှာ အသင့်စား ဂျပန်ခေါက်ဆွဲကို တီထွင် ခဲ့တဲ့ အတွက် ခုချိန်ထိ သမိုင်း တွင်ကျန်နေသူ ဖြစ်ပါတယ်။
ဘ၀ တလျှောက်လုံး သဘာဝ ၀ါဒီ တယောက် အဖြစ် နေထိုင် ခဲ့ပြီး သိပ္ပံပညာရပ် နယ်ပယ်ရဲ့ တဆစ်ချိုး “မျိုးနွယ်စုရဲ့အစ” ကို တွေ့ရှိခဲ့ ချိန်မှာ အသက် ၅၀ ရှိနေပါပြီ။
ကြော်ငြာနဲ့ မီဒီယာ လုပ်ငန်းမှာ လုပ်ကိုင် ခဲ့ပြီး အသက် ၅၀ အရွယ်မှာ ပထမဆုံး ချက်ပြုတ်နည်းစာအုပ် ထုတ်ဝေ ခဲ့ပြီးမှ အောင်မြင်တဲ့ စားဖိုမှူး တယောက် ဖြစ်လာ ခဲ့ပါတယ်။
နာဆာနဲ့ အိုင်ဘီအမ် တို့လို အဖွဲ့အစည်း တွေမှာသိပ္ပံပညာရှင် အဖြစ် အလုပ် လုပ်ခဲ့ပြီး Taser Gun ကို စဦးတီထွင် အောင်မြင် ခဲ့ချိန်မှာ အသက် ၅၀ ရှိနေပါပြီ။
ဇနီးမောင်နှံ ၂ ဦးလုံး ဥပဒေ ပညာရှင်တွေ ဖြစ်ပြီး သူတို့ရဲ့ပထမဆုံး စာအုပ် ဖြစ်တဲ့ ဇဂက် အမည်နဲ့ စားသောက်ဆိုင် အညွှန်းကို ထုတ်ခဲ့ ချိန်မှာ ၅၁ နှစ်စီ ရှိနေ ပါပြီ။
မစ်လ်ခ်ရှိတ် ပြုလုပ်တဲ့ ကိရိယာ အရောင်း ၀န်ထမ်း ဘ၀က စတင်ခဲ့ပြီး ခုချိန်မှာ ကမ္ဘာ တလွှား နာမည်ကျော် Fast Food ဆိုင် အဖြစ် အောင်မြင်နေတဲ့ မက်ခ်ဒေါ်နယ်လ်ကို ၀ယ်ယူ ခဲ့ချိန်မှာ ၅၂ နှစ် ရှိနေပြီ ဖြစ်ပါတယ်။
အသက် ၅၁ နှစ်မှာ အိမ်ခြံမြေ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူ တဦး ဖြစ်လာ ခဲ့ပြီး မိုရီ အိမ်ခြံမြေ ကုမ္ပဏီကို တည်ထောင် ခဲ့ပါတယ်။ သူ့ရဲ့ထက်မြက်တဲ့ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု တွေကြောင့် ၁၉၉၂ ခုနှစ်မှာ အမေရိကန် ဒေါ်လာ ၁၃ ဘီလီယံ အသားတင် အမြတ်ငွေ ရပြီး ကမ္ဘာ့ အချမ်းသာဆုံး အမျိုးသား တဦး ဖြစ်လာ ခဲ့ပါတယ်။
နို့ထွက် ပစ္စည်း လုပ်ငန်းမှာ နှစ်ပေါင်း များစွာ လုပ်ခဲ့ပြီး Denali Flavors ရေခဲမုန့် လုပ်ငန်းကို စတင် ခဲ့ချိန် ၁၉၉၅ ခုနှစ်မှာ ၅၇ နှစ် ရှိနေ ခဲ့ပါပြီ။ ၂၀၀၉ ခုနှစ် ကုမ္ပဏီ ထုတ်ပြန် ချက်အရ ၀င်ငွေ အမေရိကန် ဒေါ်လာ ၈၀ မီလီယံ ရှိတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
အသက်အရွယ် ရလာ ချိန်မှာမှ သမီးဖြစ်သူ ရို့စ် အကူအညီနဲ့ ကိုယ်ရေး အတ္ထုပ္ပတ္တိ ပုံပြင်တွေ ရေးခဲ့ပြီး ၁၉၃၂ ခုနှစ် အသက် ၆၅ နှစ်မှာမှ ပထမဆုံး စာအုပ် Little House ကို ပုံနှိပ် ထုတ်ဝေ ခဲ့တာပါ။ နောက်ပိုင်းမှာ သူတို့ဟာ Little House on the Prairie တီဗွီ အစီအစဉ်နဲ့ ကလေး စာပေဆိုင်ရာ တွေမှာ အောင်မြင် လာခဲ့ ပါတယ်။
ဗိုလ်မှူးကြီး ဆန်ဒါ အဖြစ် လူသိ များတဲ့ သူကတော့ ကင်တက်ကီ ကြက်ကြော် ဆိုင်ကို ၁၉၅၂ ခုနှစ်၊ ၆၂ နှစ် အရွယ်မှာ စတင်ခဲ့ပြီး ၁၂ နှစ်ကြာ ပြီးနောက်မှာ အမေရိကန် ဒေါ်လာ ၂ မီလီယံနဲ့ ပြန်လည် ရောင်းချနိုင် ခဲ့တာပါ။
ဖွားဖွား မိုးစက်လို့ လူသိများတဲ့ သူကတော့ ကိုယ်တိုင်ရေး ပန်းချီကားတွေ ရေးဆွဲခြင်းကို အသက် ၇၈ နှစ်မှ စတင် aရးဆွဲ ခဲ့တာပါ။ ၂၀၀၆ ခုနှစ်မှာတော့ သူ့ပန်းချီကားတွေ ထဲက ပန်းချီ ကား တချပ်ကို အမေရိကန် ဒေါ်လာ ၁ ဒသမ ၂ မီလီယံနဲ့ ရောင်းချ ခဲ့ရ ပါတယ်။
ဘ၀ တလျှောက် လုံး မထင်မရှား စာတွေ ရေးသားနေ ခဲ့ရာက ၂၀၀၇ ခုနှစ်၊ ၉၆ နှစ် အရွယ်မှာမှ “မမြင်နိုင်တဲ့ နံရံ-အတား အဆီး များကို ချိုးဖျက်နိုင်တဲ့ ချစ်ပုံပြင်” စာအုပ်နဲ့ အောင်မြင် ထင်ရှား လာတာ ဖြစ်ပါတယ်။
DVB by မြတ်နိုးအောင်
Original link - http://burmese.dvb.no/archives/102543
မျှဝေသူ Te Tee မှာ Tuesday, July 14, 2015 No comments:
အတန်း ပညာမှာ မထူးချွန် ပေမယ့် အောင်မြင် ထင်ရှားသူ တချို့ အကြောင်း
ဘ၀မှာ အဆင်မပြေ အဆင် မချောဘဲ ချို့ချို့ ငဲ့ငဲ့ နေထိုင် ဖြတ်သန်း သွားရ သူတွေ ကိုယ့် ၀န်းကျင်မှာ အများကြီး တွေ့ဖူး ကြမယ် ထင်ပါတယ်။ ဘ၀မှာ မအောင် မမြင် ဖြစ်ပြီး ဘ၀ပျက် သွားသူ တွေကို လေ့လာ ကြည့်ရင် အချက် ၃ ချက်ကြောင့် ကျဆုံး သွားရ တယ် ဆိုတာ တွေ့ရ ပါတယ်။ ပထမ တချက်က အတတ်ပညာ မတတ်မြောက် ကြလို့ပါ။ ဒုတိယ အချက်က အတတ် ပညာ တတ်မြောက် သော်လည်း ကိုယ့်ဘ၀ ယုံကြည်ရာ ရည်ရွယ် ရာကို တစိုက် မတ်မတ် လုပ်ဆောင်ဖို့ “ဇွဲ” မရှိ တာကြောင့် ဆိုတာ တွေ့ရ ပါတယ်။ တတိယ အချက် ကတော့ အသိ ဗဟုသုတ နည်းပါး တာကြောင့် ဆိုတာ တွေ့ရ ပါတယ်။
ဒီနေရာမှာ အတတ် ပညာ ဆိုတာ အတန်း ပညာ မဟုတ်ပါဘူး။ ပညာရေးမှာ မထူးချွန် ပေမယ့် အောင်မြင် ထင်ရှား သူတွေ အကြောင်း အပတ်စဉ် တင်ပြ ခဲ့ပါတယ်။ အံ့သြစရာ ကောင်းတာက အဲဒီ အောင်မြင် ထင်ရှား သူတွေဟာ ကမ္ဘာကျော် ပုဂ္ဂိုလ်တွေ ဖြစ်နေ တာပါပဲ။ ပြီးတော့ သူတို့ဟာ ချမ်းသြာ ကွယ်ဝတဲ့ မိဘတွေက မွေးဖွား လာတာ မဟုတ်ဘဲ ကိုယ်တိုင် ကြိုးစားပြီး အောင်မြင် လာသူတွေ ဆိုတာ တွေ့ရ မှာပါ။
အဲဒါကို ကြည့်ရင် အောင်မြင်တဲ့ ဘ၀ဆိုတာ အတန်း ပညာပေါ်မှာ မူတည် နေတာ မဟုတ်ဘူး ဆိုတာ သိမြင်နိုင် ပါတယ်။ ပညာရေးမှာ မအောင်မြင် ပေမယ့် အောင်မြင် သူတွေ အကြောင်း တင်ပြ ပေးပါမယ်။ အဲဒီ ထဲမှာ အားကစား သမားတွေ၊ အဆိုတော်တွေ၊ ရုပ်ရှင် သရုပ်ဆောင်၊ အောင်မြင်တဲ့ လုပ်ငန်းရှင် တွေလည်း ပါဝင်နေ ပါတယ်။
Christina Maria Aguilera (ခရစ္စတီနာ မာရီယာ အဂွီလီရာ)
photo - mtvindia.com
သူမကို ၁၉၈၀ ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာ ၁၈ ရက်နေ့မှာ နယူးယောက်ရှိ Staten Island မှာ မွေးဖွားခဲ့ပါတယ်။ ဒါကြောင့် သူမဟာ အခုဆိုရင် အသက် ၃၃ နှစ်ပြည့်ပြီ ဖြစ်ပါတယ်။ သူမ ငယ်စဉ်ကတည်းက မိဘတွေက ကွာရှင်းပြတ်စဲ ခဲ့တာကြောင့် သူမဟာ မိခင်နဲ့အတူ နေထိုင်ကြီးပြင်းခဲ့ရတာပါ။ ငယ်စဉ်ကတည်းက ဟိုပြောင်း သည်ပြောင်း ပြောင်းရွှေ့နေထိုင်ခဲ့ရပေမယ့် သူမရဲ့ ခရစ္စတီနာလေးဟာ ငယ်စဉ်ကတည်းက အဆိုတော်ဖြစ်ဖို့ စိတ်ဆန္ဒ ပြင်းပြခဲ့ပါ တယ်။ ၁၉၈၉ ခုနှစ်မှာတော့ The All Nes Mickey Mouse Club က သူမကို ဖိတ်ခေါ်ခံခဲ့ရတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
အဲဒီနောက် ၁၉၉၉ မှာတော့ “Genie inaBottle” သီချင်းနဲ့ စတင်အောင်မြင်သွားပါတယ်။ အဲဒီနောက် သူမဟာ သန်းချီတဲ့ သီချင်းခွေတွေရောင်းချရပြီး၊ ဆုတံဆိပ်တွေလည်း အများအပြား ရရှိခဲ့ပါတယ်။ အဲဒီထဲမှာ အမျိုးသမီး အနုပညာရှင် ဂရမ်မီဆုလည်း ပါဝင်ပါတယ်။ သူမရဲ့ မိခင် တယောပညာရှင် Shelly Loraine က အမေရိကန်ဖွား တဦးဖြစ်ပြီး၊ ဖခင်ဖြစ်သူ Fausto Xavier Aguilera ကတော့ အီကွေဒေါနိုင်ငံဖွား ဖြစ်ပါတယ်။
သူမကို လွှမ်းမိုးတဲ့ ဂီတ ပညာရှင်တွေကတော့ Mariah Carey (မာရီယာ ကာရေး)၊ Whitney Houston နဲ့ Jannet Jackson (မိုက်ကယ်ဂျက်ဆင်ရဲ့ ညီမ) တို့ ဖြစ်တယ်လို့ သိရပါတယ်။
သူမရဲ့ ခင်ပွန်းက Jordan Bratman (ဂျော်ဒန် ဘရက်မင်း) ဖြစ်ပြီး ၂၀၀၅ ခုနှစ် နိုဝင်ဘာ ၁၉ ရက်နေ့မှာ လက်ထပ်ခဲ့ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ၂၀၁၁ ခုနှစ်၊ အေပြီ ၁၅ မှာ ကွာရှင်းပြတ်စဲခဲ့ပြီး ကလေးတယောက် မွေးဖွားခဲ့တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
သူမ ပြောတဲ့ ထင်ရှားတဲ့ စကားတွေက ဘရစ်နေစပီးယားနဲ့ ပတ်သက်ပြီး “ကျမတို့ တယောက်နဲ့ တယောက် မုန်းနေပါတယ် ဆိုတဲ့ ကောလာဟလက တကယ့်အမှန် မဟုတ်ပါဘူး။ မနှစ်သက်တာမျိုး ဘဲစားဘဲချေ ဆိုတာမျိုး မရှိဘူး။ ဘရစ်နေစပီးယား အောင်မြင်တာတွေနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ကျမ ဂုဏ်ယူပါတယ်။ သူမက အရမ်းအလုပ်လုပ်တဲ့သူပါ။ ကျမ အထူးအထွေ ပြောစရာ မရှိပါ။ ဒါပေမယ့် ကျမမှာ သူမကို ချစ်ခြင်းတွေသာ ရှိနေပါတယ်” လို့ ပြောပါတယ်။
နောက်ပြီး သူမ ပြောတာ ရှိသေးပါတယ်။ အဲဒါကတော့ “ကျမ သီချင်းတွေ ဆိုနေတဲ့ အချိန်တိုင်း အဲဒီသီဆိုနေရတဲ့ အချိန်မှာ ကျမကို ကျမ ပိုင်တယ်ဆိုတာ ခံစားမိပြီး၊ ကျမရဲ့ အကောင်းဆုံး ဖွင့်ထုတ်ပြဖို့ပဲ ရှိပါတယ်။ ဂီတက ကျမကို ကိုယ့်အသိုက်အမြုံကို ပြန်တွေ့သလိုမျိုးခံစားရပါတယ်။ အဲဒီကနေပြီး တခြားသူတွေလည်း အသိုက်အမြုံ တွေ့ဖို့ ကျမ သီဆိုတဲ့ သီချင်းကနေ ရစေဖို့ မျှော်လင့်ပါတယ်။ တကယ်တော့ နွေးထွေးတဲ့ အိမ်ရာအသိုက်အမြုံဆိုတာ လူတိုင်းအတွက် အထူးအဓိက အရေးပါတယ်လေ” လို့ ပြောပါတယ်။
Orlando Bloom (အော်လန်ဒို ဘလွမ်းမ်)
Pirates of the Caribbean: The Curse of the Black Pearl ဇာတ်ကားနဲ့ အထူးထင်ရှားလာတဲ့ ရုပ်ရှင်သရုပ်ဆောင် အော်လန်ဒို ဘလွမ်းမ် အကြောင်း ဆက်လက်တင်ပြပေးပါဦးမယ်။
သူ့ကို ၁၉၇၇ ခုနှစ်၊ ဇန်န၀ါရီ ၁၃ ရက်နေ့၊ အင်္ဂလန်နိုင်ငံ ကင်တာဘာရီမှာ မွေးဖွားခဲ့ပါတယ်။ သူ့ရဲ့ ဖခင်က Herry Bloom ဖြစ်ပြီး၊ လူထုအခွင့်အရေးအတွက် တိုက်ပွဲဝင် လှုပ်ရှားခဲ့သူ ဖြစ်ပါတယ်။ သူ့ အသက် ၄ နှစ်သားမှာပဲ ဖခင်ဖြစ်သူဟာ လေဖြတ်ပြီး ကွယ်လွန်သွားခဲ့တာကြောင့် မိခင်(Sonia) ရဲ့ ပြုစုစောင့်ရှောက်မှုနဲ့ ကြီးပြင်းလာသူပါ။
သူဟာ ကင်တာဘာရီမှာရှိတဲ့ St. Edmunds School ကိုတက်ရောက်ခဲ့ပါတယ်။ အနုပညာအလုပ် အတော်များများကို လုပ်ဆောင်ခဲ့ပါတယ်။ ကျောင်းကပွဲတွေမှာ ပါဝင် ကပြခဲ့သလို ကိုယ့်အရပ် ကိုယ့်ဇာတ် ဖျော်ဖြေမှုတွေမှာလည်း ပါဝင်ခဲ့ပါတယ်။ အဲဒီနောက် မိခင်ဖြစ်သူက ကဗျာစာပေ ရေးသားခြင်းကို အားပေးတာကြောင့် ကဗျာတွေလည်း ရေးသားခဲ့တယ်လို့ သိရပါတယ်။ အဲဒီနောက် British American Drama Academy မှာ ပညာသင်ဆု ရရှိခဲ့ပြီး၊ အခြား လူငယ် သရုပ်ဆောင်တွေလိုပဲ လေ့လာသင်ယူမှုတွေ ပြုလုပ်ခဲ့ရပါတယ်။ ၁၉၈၆ မှာ Casuality ၊ ၁၉၉၇ မှာ Mdisomer Murder ၊ ၁၉၉၉ မှာ Smack the Pony ဇာတ်လမ်းတွဲတွေမှာ ပါဝင်ခဲ့ပါတယ်။
သူဟာ ၂၀၁၀ ခုနှစ်မှာ ဇူလိုင် ၂၂ ရက်နေ့မှာ Miranda Kerr နှင့် အိမ်ထောင်ကျခဲ့ပြီး ကလေးတယောက် မွေးဖွားခဲ့ပါတယ်။ လက်ရှိမှာတော့ သူတို့နှစ်ယောက်ဟာ တရားဝင် ကွာရှင်းတာမျိုး မဟုတ်ဘဲ ကွဲကွာ နေတယ်လို့ သိရပါတယ်။
သူပြောတဲ့ မှတ်သားစရာ စကားတချို့ကို ဆက်လက်တင်ပြပါဦးမယ်။
ချစ်ခြင်းတရားနဲ့ ပတ်သက်ပြီး “ကျနော်ဟာ ချစ်ခြင်းထဲမှာ ချစ်နေမိတာပါ။ အဲဒီလို ချစ်နေချိန်မှာ သူမ အကြောင်း မစဉ်းစားဘဲ မနေနိုင်အောင်ပါပဲ” လို့ ဆိုပါတယ်။ သူ့ အလုပ်နဲ့ ပတ်သက်ပြီးတော့လည်း “ကျနော် လုပ်ကိုင်နေရတဲ့ အလုပ်က မာရသွန် အပြေးသမားတယောက်လိုပါပဲ။ မြန်မြန်ပြေးဖို့ ဆိုပြီး ကျနော် မမြင်ပါဘူး။ ရေရှည်ခံနိုင်ရည်က အဆုံးအဖြတ် ပေးသွားမယ်လို့ ထင်ပါတယ်” လို့ ဆိုပါတယ်။
မျှဝေသူ Te Tee မှာ Thursday, May 07, 2015 No comments:
ကဏ္ဍ ကမ္ဘာကျော်များ, ဆောင်းပါး
အဖိနှိပ်ခံ တို့၏ အခမဲ့ ရှေ့နေ
ဦး ရောဘတ် စန်းအောင် (ဓာတ်ပုံ – ဧရာဝတီ)
အာဏာပိုင် များက နိုင်ငံရေး လှုပ်ရှား သူများ၊ ဒီမိုကရေစီ အရေး တက်ကြွ လှုပ်ရှားသူ၊ လူ့ အခွင့် အရေး လှုပ်ရှား သူများ၊ သတင်း မီဒီယာ သမား များကို ပုဒ်မ အမျိုးမျိုး တပ်၍ တရားစွဲ ဖိနှိပ်လေ့ ရှိပြီး အဖိနှိပ်ခံ တရားစွဲဆို သူတို့ ဘက်မှ ငွေကြေး တစုံ တရာ မယူဘဲ အခမဲ့ ရှေ့နေ လိုက်ပေးသူ တဦး ရှိနေသည်။
အနက်ရောင် တိုက်ပုံ အင်္ကျီဝတ်ဆင် ထားပြီး ကောင်းဘွိုင် ဦးထုပ်ကို ဆောင်းထားသော အဆိုပါ ရှေ့နေကို ဒီမိုကရေစီ လှုပ် ရှား သူ ကို စစ်ဆေးသော တရားရုံး များတွင် တွေ့မြင် ရလေ့ ရှိသည်။ အာဏာပိုင် တို့၏ ဖိနှိပ်မှု၊ ခြိမ်းခြောက်မှု ၊ ဖမ်းဆီး ထောင်ချ မှုများ မကြာ ခဏ ဆိုသလို တွေ့ကြုံ ခဲ့ရသော်လည်း နောက် မဆုတ်ဘဲ အဖိနှိပ်ခံ တို့၏ ဘက်မှ သူက မားမား မတ် မတ် ရပ်တည် ခဲ့သည်။ သူ့နာမည်က ရောဘတ် စန်းအောင်။ နာမည် ခပ်ဆန်းဆန်းနှင့် တရား လွှတ်တော်ရှေ့နေ ရောဘတ် စန်းအောင် ကို ဥပဒေ လောကတွင် မသိသူ နည်းပါး လှသည်။
တရား လွှတ်တော်ရှေ့နေ အဖြစ် အသက်မွေးကြောင်း သော်လည်း သူအများဆုံး လိုက်သော အမှုများက နိုင်ငံရေးနှင့် ပတ် သက် ဆက်နွယ်သော အမှုများသာ အများစု ဖြစ်သည်။ အဖိနှိပ်ခံ တို့၏ ဥပဒေ ဘက်တော်သား တရား လွှတ်တော် ရှေ့နေ ဖြစ်လာ စေရန် တွန်းအား တရပ်က သူ၏ မိခင်ကြောင့်ဆိုလျှင် မမှားနိုင်ပေ။
“ အမေ မှာထား တာက သူများ သားမယား စော်ကားလို့၊ သူများ ပိုက်ဆံ လိမ်လို့ သူများကို ထိုးလို့၊ ကျိတ်တဲ့ အမှုမျိုး မလိုက် နဲ့။ နိုင်ငံရေး လုပ်မယ် ဆိုရင် ပညာတတ် ဘွဲ့ရ တယောက် ဖြစ်အောင် ကြိုးစားပြီး လုပ်။ လူမျိုးရေး၊ ဘာသာရေးနဲ့ မဆက်နွယ်နဲ့။ ဆက်နွယ်မိလို့ ရှိရင် ဟစ်တလာ တို့လို အသေဆိုးနဲ့ သေရ လိမ့်မယ်လို့ အမေမှာ ခဲ့တယ်” ဟု ဦးရောဘတ် စန်းအောင်က ဆိုသည်။
မိဘ အသိုင်းအ၀ိုင်းက နိုင်ငံရေးနှင့် ပတ်သက်သော မိသားစု မဟုတ်ဘဲ ဦးရောဘတ် စန်းအောင် တဦးတည်းသာ တမိပေါက် တယောက် ထွန်းဆိုသလို အသက် ၁၆ နှစ် ကျော်ကျော် ကတည်းက နိုင်ငံရေး နယ်ပယ်တွင် တက်တက် ကြွကြွ ပါဝင်ခဲ့ သူ ဖြစ်သည်။
လမ်းမတော်မြို့နယ် အမှတ် ၁ အခြေခံ ပညာ အထက်တန်း ကျောင်းတွင် ရောဘတ် အမည်နှင့် တက် ရောက်ခဲ့ဖူး သည့် အတွက် နာမည်ရင်း ရှေ့တွင် ရောဘတ် ထည့်၍ ရောဘတ် စန်းအောင် အမည်နှင့် ပင် ၁၉၇၁ ခုနှစ်မှ စ၍ နိုင်ငံရေး နယ်ပယ် တွင် ထဲထဲ ၀င်ဝင် လှုပ်ရှား ခဲ့သည်။
၁၉၇၄ ခုနှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလ ၅ ရက်နေ့ ဦးသန့် အရေးအခင်း ဖြစ်ပွားချိန်တွင် သချာင်္ ဘာသာရပ် ဆည်းပူး နေသော ပထမနှစ် ကျောင်းသား အဖြစ် တက္ကသိုလ်တွင် တက်ရောက်နေချိန် ဖြစ်သည့် အတွက် အရေး အခင်းတွင် တက်ကြွစွာ ပါဝင် လှုပ် ရှား ခဲ့ရာမှ အင်းစိန် ထောင်တွင် ၂ လနီးပါး ပထမဆုံး အကြိမ် ထောင်နန်းစံ ခဲ့ရသည်။
“ဦးသန့်အရေး အခင်းမှာ ကျနော်က ပထမနှစ်ကျောင်းသား၊ ကျနော်ယူရတဲ့ အပိုင်းက ရိက္ခာ သွားကောက် ရတယ်။ နောက်ပြီး ညဘက်ကျ မှောင်ထဲမှာ ဆေးပေါ့လိပ်ကြီး ဖွာပြီးတော့ ကင်းစောင့် ရတာပေါ့ဗျာ” ဟု ဦးရောဘတ် စန်းအောင်က ဆိုသည်။
ထောင်မှ လွတ်ပြီးနောက် ကုန်ဈေးနှုန်း ကျဆင်းရေး အတွက် နိုင်ငံတော် ကောင်စီ ၀န် ဒေါက်တာ လှဟန် တို့က တက္ကသိုလ် များတွင် လာရောက် ဆွေးနွေးစဉ် နိုင်ငံရေး လှုပ်ရှားမှုများ လုပ်ဆောင် ခဲ့သည့် အတွက် ၁၉၇၅ ခုနှစ် ဇွန်လ ၁၁ ရက်နေ့ တွင် ထပ်မံ အဖမ်းခံ ခဲ့ရပြီး နိုဝင်ဘာလ ၃၀ ရက်နေ့တွင် ပြန်လည် လွတ်မြောက် လာခဲ့သည်။
ဒုတိယ အကြိမ် ထောင်မှ ပြန်လွတ် လာပြီးနောက် တွင်မူ တက္ကသိုလ် တက်ရောက်ခွင့် မရတော့ဘဲ ၁၉၇၆ ခုနှစ်တွင်မှ ပေါ် ပေါက် လာသည့် တက္ကသိုလ် စာပေး စာယူ သင်တန်းကို ဥပဒေ ဘာသာရပ် အထူးပြုဖြင့် တက်ရောက်ခွင့် ရရှိခဲ့သည်။ ဥပဒေ ဘာသာရပ် ပထမနှစ် သင်ကြားနေစဉ် မှာပင် သခင်ကိုယ်တော်မှိုင်း ရာပြည့်ပွဲ ကျင်းပရန် လုပ်ဆောင် မှုနှင့် တတိယ အကြိမ် အဖမ်း ခံခဲ့ရသည်။ အဖမ်းခံ ရာမှ ပြန်လည် လွတ်မြောက် လာပြီးနောက် သည့်တွင်လည်း စာသင်ကြားမှု ၃ နှစ် ရပ်ဆိုင်း ခံခဲ့ ရပြန်သည်။
“စာပေးစာယူ သင်တန်းကနေ ထုတ်ပယ်ခြင်း ခံရတဲ့ အတွက် သုံးနှစ်ကျော်လောက် ပညာ သင်ကြားမှု ရပ်ဆိုင်း ခံခဲ့ရတယ်။ နောက်ပြန် ရတယ်။ ၁၉၈၀ ခုနှစ်မှာ ပြန် ကျင်းပတဲ့ အထက်တန်း ရှေ့နေ စာမေးပွဲမှာ ၀င်ဖြေရင်း အောင်မြင်ခဲ့တဲ့ အတွက် ဥပဒေ ဘွဲ့မရခင် အထက်တန်းရှေ့နေ အဖြစ်နဲ့ ရှေ့နေ လောကကို ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းရဲ့ အကို နတ်မောက် ဦးလှသန်း ဆီမှာ အလုပ်သင် ရှေ့နေ အဖြစ် ပညာသင် ခဲ့ပါတယ်။ ၁၉၈၂ ခုနှစ်မှာ စာပေး စာယူနဲ့ ဥပဒေဘွဲ့ကို ရရှိပြီးနောက် ပိုင်းမှာ အဲဒီတုန်းက ဗဟို တရားရုံးရှေ့နေ ( အခု တရားလွှတ်တော် ရှေ့နေ) အဖြစ် လိုက်ပါ ဆောင်ရွက်ခဲ့ ပါတယ်”ဟု ဦးရောဘတ် စန်းအောင်က ဆိုသည်။
မြန်မာ့ဆိုရှယ်လစ်လမ်းစဉ် (မဆလ) ပါတီလက်ထက် တရားရုံးများတွင် မဆလ ပါတီ၏ သြဇာသက်ရောက်မှုများ ပြင်းထန် နေချိန် ဖြစ်သည့်အတွက် ဥပဒေအကာအကွယ်မဲ့နေမှုများအတွက် ပြည်သူများဘက်မှ အမှုလိုက်ပါ ဆောင်ရွက် ခဲ့ရာ မဆလ ပါတီ ၏ အငြိုးထားခြင်းကို ခံခဲ့ရသည်။
“ပြည်သူတွေဘက်က အမှုလိုက်တယ်ဆိုတော့ မဆလ ပါတီရဲ့ မုန်းတီးခြင်းကိုလည်း ခံရတယ်။ အာဏာပိုင်တွေရဲ့ မုန်းတီး ခြင်းကိုလည်း ခံရပါတယ်” ဟု ဦးရောဘတ်စန်းအောင်က ဆိုသည်။
ယင်းနောက်ပိုင်းတွင် ဖုန်းမော် အရေးအခင်းနှင့် ၈လေးလုံး ဒီမိုကရေစီ အရေးတော်ပုံကြီး အစပျိုးလာချိန်၁၉၈၈ ခုနှစ် မတ်လ ၂၅ ရက်နေ့တွင် နောက်ကွယ်မှ ကြိုးကိုင်ပြီး လှုပ်ရှားသူတဦးဟု အမည်တပ်၍ ထိန်းသိမ်းခံခဲ့ရသေးသည်။
“ ထောက်လှမ်းရေးပေါင်းစုံက တမင်သက်သက် သူတို့ မဆလ ပါတီကို ရှေ့နေလောကမှာ ဆန့်ကျင်တဲ့လူ အဖြစ် သတ် မှတ် ပြီး နှုတ်ပိတ်ဖို့အတွက် ထိန်းသိမ်းခံခဲ့ရတယ်။ ကျနော်တို့ကို ပြန်လွှတ်ပြီး နောက်တလလောက်မှာပဲ အင်းစိန် အကျဉ်း ထောင် အပါအ၀င် နယ်တော်တော် များများက အကျဉ်းထောင်တွေမှာ ထောင်တွင်းဆူပူမှုတွေဖြစ်ပြီး ပွင့်ကုန်တယ်။ တချို့ထောင်တွေမှာ အရေးကြီး စာရွက်စာတမ်းတွေ မီးရှို့ဖျက်ဆီးခံရတယ်။ မှတ်မှတ်ရရ ပြောရမယ်ဆိုရင် ထောင်ဖောက် တဲ့နေ့ဟာ ၁၉၈၈ ခုနှစ် သြဂုတ်လ ၂၅ရက် ဖြစ်တယ်။ ၂၆ ရက် သောကြာနေ့က ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ ရွှေတိဂုံ ဘုရား အနောက်ဖက်မုဒ် လူထုတွေ့ဆုံပွဲမှာ ထောင်အသီးသီးက ထွက်လာခဲ့တဲ့ ခိုး၊ ဆိုး လုယက်သမားတွေက ပြည်သူ လူထု ကြားမှာ သူတို့ရဲ့ အငတ်ပြသနာကို နည်းမျိုးစုံနဲ့ ကျင့်သုံးတော့ မတည်ငြိမ်မှု မငြိမ်းချမ်းမှုတွေနဲ့ နောက်ဆုံး တန်ပြန် တော်လှန်ရေး သပိတ် ဆိုတဲ့ ထောက်လှမ်းရေးဘက်က လုပ်တဲ့ လုပ်ဇာတ်တွေနဲ့ လူသတ်မှုတွေကို တိုက်ရိုက် ကျူးလွန် ပြီး စတင်ဘာလ ၁၈ ရက်နေ့မှာ ဗိုလ်နေ၀င်းက ဗိုလ်စောမောင်ကို အာဏာလွှဲပေးခဲ့တယ်” ဟု ဦးရောဘတ် စန်းအောင်ကဆိုသည်။
ဦးရောဘတ်စန်းအောင်သည် နိုင်ငံရေး လှုပ်ရှားသူများ၊ ပြည်သူများ၏ လူ့အခွင့်အရေး ချိုးဖောက်ခံနေရသည့် အမှု အခင်း များတွင် ရှေ့နေလိုက်ပေးနေရင်း ၁၉၉၃ ခုနှစ် ဇန်န၀ါရီလ ၁ရက်နေ့တွင် ရှေ့နေလိုင်စင် အသိမ်းခံခဲ့ရသည်။
“ရှေ့နေလိုင်စင်သိမ်းခံရတော့ နိုင်ငံရေး နယ်ပယ်မှာ ပြည့်ပြည့်၀၀ ၀င်ရောက်လှုပ်ရှားနေရင်းနဲ့ ၁၉၉၇ ဇန်န၀ါရီလ ၇ ရက် အင်္ဂါနေ့ မနက်ပိုင်းမှာ ထောက်လှမ်းရေးရဲ့ ဖမ်းဆီးခြင်းကို ခံရပြီး ABSDF ရဲ့ မြေအောက်လှုပ်ရှားရေးမှာ သတင်းယူသူ အဖြစ် အင်းစိန်ထောင်ဝန်းထဲမှာ မိသားစုနဲ့လည်း မတွေ့ရ၊ ရှေ့နေလည်း မငှားရဘဲ ပုဒ်မ ၅(ည)နဲ့ ပုဒ်မကြီး အမှတ် ၄၇/၉၇ နဲ့ ထောင်ဒဏ် ၇ နှစ် ချမှတ်ခံခဲ့ရတယ်” ဟု ဦးရောဘတ်စန်းအောင်က ဆိုသည်။
ထောင်တွင်း အကျဉ်းကျခံနေရစဉ်တွင် သာယာဝတီထောင်သို့ ပြောင်းရွှေ့ခံခဲ့ရပြီးနောက် ၂၀၀၃ ခုနှစ် သြဂုတ်လ ၁၁ ရက် နေ့ တွင် ပြန်လည် လွတ်မြောက်လာခဲ့ကာ တရားဥပဒေ စိုးမိုးရေး ဆုံးရူံးနေမှုများ၊ တရားရုံးများ၏ မတရားမှုများကို ဆက်လက် ဖော်ထုတ် တိုက်ပွဲဝင်ခဲ့သည်။
သူထောင်ကျနေစဉ်အတွင်း ဖိနှိပ်မှု၊ နှိပ်စက်ညှင်းပန်းမှု အမျိုးမျိုး ကြုံတွေ့ခဲ့ရသော်လည်း သူ၏ နိုင်ငံရေးရည်မှန်းချက်နှင့် ရပ်တည်ချက်များမှာ ဆက်လက် ခိုင်မာအမြစ်တွယ်နေခဲ့သည်။ ဒီမိုကရေစီထွန်းကားမှုနှင့် တရားဥပဒေစိုးမိုးမှုသည် နိုင်ငံ တခု တိုးတက်ရေးနှင့် ပြည်သူများအားလုံး အေးချမ်းစွာ နေထိုင်စားသောက်နိုင်ရေးအတွက် အဓိက သော့ချက်ဖြစ် သည် ကို သူယုံကြည်လက်ခံထားသည်။
“ ကျနော့်ကို စစ်ကြောရေး ၀င်တုန်းက ၄ ရက်ဆက်တိုက် အစစ်ခံခဲ့ရတယ်။ အဲဒီတုန်းက ၂၄ နာရီမှာ ထမင်းကျွေးတာ လက်ဖက် ရည်ပန်းကန်လုံးနဲ့ တလုံးပဲ စားရတယ်။ ရေဆိုလည်း မတ်ခွက် တခွက်ပဲ ရတယ်။ ကျနော်တို့ကို ထားတဲ့ အခန်း ရှေ့မှာ ရေအိုးရှိတယ်။ ဒါပေမယ့် ရေအိုးအဖုံးကို တနေရာ၊ ရေခွက်ကို တနေရာ လက်လှမ်းမမှီတဲ့နေရာကို လွှင့်ပစ်ထား တယ်။ ရိုက်နှက်ခံရတာလဲ သွေးအလိမ်းလိမ်းပဲ။ အရမ်းရက်စက်ကြတယ်။ ရေငတ်လွန်းလို့ ရေတောင်းတော့ သူတို့က သောက်ရေသန့်ကို မြိန်ရေယှက်ရေ သောက်နေပြီး ကျနော့်ကိုတော့ လက်ညိုးထိုးပြတယ်။ အိမ်သာ ရေထည့်ထားတဲ့ အင်ဒုံခွက် မှာ သောက်ခိုင်းတယ်။ ကျနော်လည်း ရိုက်နှက်ထားတဲ့ဒဏ်တွေနဲ့ ရေအရမ်းငတ်နေတော့ အဲဒီမှာ ရှိတဲ့ အုန်းမှုတ်ခွက် နဲ့ သောက်မလို့လုပ်နေတုန်း ကျနော့်ကို ပိတ်ကန်တယ်။ နောက်ပြီး အုန်းမှုတ်ခွက်နဲ့ မင်းနဲ့ မတန်ဘူးပြောလို့။ အဲဒီ အတိုင်း ဖင်ဆေးတဲ့ ရေကိုပဲ လေးဘက်ထောင့်ပြီး ခွေးလို သောက်ခဲ့ရတယ်” ဟု သူက ပြောသည်။
ဦးရောဘတ်စန်းအောင်သည် ၄င်းဘ၀တလျှောက်တွင် နိုင်ငံရေး လှုပ်ရှားမှုများကို ယုံကြည်ချက်ဖြင့် လုပ်ကိုင်ရင်း ၆ ကြိမ် တိုင်တိုင် ဖမ်းဆီးထောင်ချခံခဲ့ရသည်။ ထောင်ကျနေစဉ်အတောအတွင်းမှာလည်း အလကားမနေဘဲ ဥပဒေမဲ့ လုပ်ရပ်များ ကို သတင်းအချက်အလတ်များ ရနိုင်သလောက် စုံစမ်းမေးမြန်းခဲ့ရာ ယင်းမေးမြန်းမှုကြောင့် ကလေးထောင်တွင် ရှိနေစဉ် သေဒဏ်ပေးခံထားရသည့် ကလေးစစ်သားတဦးကို သူ ထောင်မှ လွတ်ချိန်တွင် ပြန်လည် ကယ်တင် နိုင်ခဲ့သည်။
သူကလေးထောင်တွင် ရှိနေစဉ် ဖြိုးစည်သူဆိုသော သေဒဏ်ကျ ကလေးစစ်သားတဦးအကြောင်းကို ကြားသိခဲ့ရပြီး အမှုကို ပြန်လည် စစ်ဆေးကြည့်သောအခါ မတရားသော အမှုတခုအဖြစ် တွေ့ရ၍ အမှုပေါ်ရေး အားထုတ်ခြင်းဖြင့် ယင်းကလေး စစ်သား ကို ပြန်လည် လွတ်မြောက်အောင် ကူညီနိုင်ခဲ့သည်။
ဖြိုးစည်သူသည် အသက် ၁၄ နှစ်နှင့် နှစ်လတွင် အိမ်နှင့် စိတ်ဆိုး၍ ခြေဦးတည့်ရာ ဆင်းလာခဲ့ရင်း သာကေတ အရောက် တွင် ဆိုက်ကားသမားတဦး၏ ခေါ်ဆောင်မှုကြောင့် ကလေးစစ်သားအဖြစ် စုဆောင်းခံလိုက်ရသည်။ ယင်းနောက် ရှေ့တန်း စခန်း ပါသွားရင်း ချင်းပြည်နယ်တွင် ဘိန်းစိုက်ခင်းများမှ ရသည့် ဝေစုကို ခွဲဝေယူရင်း အဝေမတည့် ဖြစ်ကာ တပ်တွင်း ပစ်ခတ်မှုဖြစ်ပွားခဲ့ပြီး ဖြိုးစည်သူ၏ ပစ်ခတ်မှုကြောင့် တပ်ရင်းမှူး ဒဏ်ရာရရှိသွားခဲ့သည်။ ယင်းပြစ်မှု ကြောင့်ပင် သူ့ကို စစ်ခုံရုံးက သေဒဏ်အပြစ်ပေးခဲ့သည်။
“သူ ပစ်လိုက်တဲ့ ကျည်ဆံက တပ်ရင်းမှူးကို ထိသွားတယ်။ အဲဒီတုန်းက သူက ကလေးပဲ ရှိသေးတယ်။ သူသေဒဏ် ကျတဲ့ အချိန်က ၁၅ နှစ် မပြည့်သေးတဲ့အချိန်မှာ သေဒဏ်ကျတော့ အဲဒီအချိန်က ကလေးစစ်သားပဲ။ ဒါကြောင့် သူဆီက အချက် အလက်တွေ ယူပြီး အပြင်ထွက်လာတော့ သူ့မိဘကို ရအောင်လိုက်ရှာပြီးတော့ ILO နဲ့ ကြက်ခြေနီ အကူအညီ တွေနဲ့ ၂၀၁၁ ခုနှစ် စတင်ဘာလ ၁၁ နေ့မှာ ဖြိုးစည်သူ ထောင်က လွတ်လာခဲ့တယ်” ဟု ဦးရောဘတ်စန်းအောင်က ရှင်းပြ သည်။
ဦးရောဘတ်စန်းအောင်သည် ၂၀၁၂ ခုနှစ် ဇူလိုင်လ ၉ ရက်နေ့တွင် တရားလွှတ်တော်ရှေ့နေ လိုင်စင် ပြန်လည် ရရှိ ခဲ့ပြီး မြန်မာပြည်အနှံမှ လယ်ယာမြေ ပြဿနာများ၊ ပြည်သူလူထု၏ လူ့အခွင့်အရေး ဆုံးရူံးမှုနှင့် သက်ဆိုင်သည့် အမှုကိစ္စ များကို ကူညီဆောင်ရွက်ပေးနေခဲ့ရာမှ ယခုအချိန်အထိ အမှုပေါင်း ၁၀၀ နီးပါးတွင် အခမဲ့ ရှေ့နေလိုက် ပေးနိုင်ခဲ့ပြီ ဖြစ်သည်။
“လူတိုင်းက လူ့အခွင့်အရေးကို ခံစားခွင့် ရှိရမယ်။ ကျနော်တို့ ပြောနေတဲ့ လူ့အခွင့်အရေးဆိုတာက တရားဥပဒေမှာ ပါတဲ့ အခြေခံ အခွင့်အရေးကို ခံစားစေဖို့ပဲ။ သီးခြား အခွင့်အရေး အနေနဲ့ ဒံပေါက်ထုပ်ပေးပါလို့ တောင်းနေတာမဟုတ်ဘူး။ တရားခံ လို့ စွပ်စွဲခံရတဲ့သူတွေကို နေ့စဉ် ကြက်သားဟင်းနဲ့ ကျွေးပါလို့ မတော်လောဘနဲ့ တောင်းနေတာ မဟုတ်ပါဘူး။ တရား သဖြင့်ကို တောင်းတာ အဲဒါက လူ့အခွင့်အရေးပဲ” ဟု သူက ပြောသည်။
ယခုအချိန်ထိ တရားရုံးများတွင် နိုင်ငံရေးအမှုများ စစ်ဆေးရာတွင် တရားသူကြီးများ၏ နောက်ကွယ်တွင် အာဏာပိုင်များ၏ ကြိုးကိုင်မှုများရှိနေသေးသည်ဟု သူက ဆိုသည်။
တရားလွှတ်တော်ရှေ့နေ ဦးရောဘတ်စန်းအောင်၏ ပြည်သူဘက်မှ တသက်တာ ရပ်တည်၍ ဥပဒေစိုးမိုးရေး ဆောင်ရွက် မှု ကြောင့် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ လူ့အခွင့်အရေးအဖွဲ့အစည်းများက ချီးမြှင့်သည့် Martin Ennals လူ့အခွင့်အရေးဆုကို ချီးမြှင့် လိုက်ပြီး ဥရောပသမဂ္ဂမှ ချီးမြှင့်မည့်၂၇ ကြိမ်မြောက် Tipperary International Peace နိုင်ငံတကာ ငြိမ်းချမ်း ရေးဆုအတွက် ကုလသမဂ္ဂအထွေထွေအတွင်းရေးမှူးချုပ် ဘန်ကီးမွန်းနှင့်အတူ ဦးရောဘတ်စန်းအောင်ကို နောက်ဆုံး ဆန်ကာ တင်စာရင်းတွင် လျာထားခြင်းခံရကြောင်း သိရှိရသည်။
နိုင်ငံတကာ အဖွဲ့အစည်းများ၏ အသိအမှတ်ပြုမှုနှင့် ဆုများချီးမြှင့်ခြင်းခံထားရသည့် ဦးရောဘတ်စန်းအောင်သည် ယခု အချိန်တွင် အသက် ၆၀ ကျော်အရွယ် ရှိနေပြီဖြစ်သော်လည်း လူ့အခွင့်အရေးလှုပ်ရှားသူများ၊ နိုင်ငံရေးလှုပ်ရှား သူများ၊ ကျောင်းသားများ၊ ပြည်သူများအပါအ၀င် အာဏာရှင်တို့၏ မတရားဖိနှိပ် ပုဒ်မတပ် စွဲဆိုသော အမှုအခင်းများ စစ်ဆေးရာ တရားရုံးများသို့ အားမာန်အပြည့်ဖြင့် ချီတက်ဝန်းရံနေဆဲဖြစ်ရာ အဖိနှိပ်ခံတို့၏ အားကိုးရာ အခမဲ့ရှေ့နေ ဥပဒေဘက်တော် သား တဦးအဖြစ် သမိုင်းတွင်ကျန်ရစ်မည်မှာ အသေအချာပင်ဖြစ်သည်။
ကဏ္ဍ ကမ္ဘာကျော်များ, သမိုင်း, ဆောင်းပါး
ဒေါ် အောင်ဆန်း စုကြည်၏ မိခင်သည် ဖခင် ဖြစ်သူ လောက် လူသိ မများပါ။ သို့သော်လည်း ဒေါ်အောင်ဆန်း စုကြည် ဘဝတွင် သူ၏ လွှမ်းမိုးမှုကို ပစ်ပယ်၍ မထား သင့်ပါ။ ဒေါ်အောင်ဆန်း စုကြည်က သူ့ဖခင် ဗိုလ်ချုပ် အောင်ဆန်း၏ အသွင် အပြင်၊ အသိဥာဏ် ပညာနှင့် အတွေး အမြင်များကို အမွေ ဆက်ခံနိုင်ခဲ့ ခြင်းမှာ သူ့ဘဝကို မြှင့် တင်ပေး ခဲ့သည့် တာဝန် ကျေပွန်သော စိတ်ထား ဖြောင့်မှန် သော မိခင် ဖြစ်သူ ဒေါ်ခင်ကြည် ကြောင့် ဖြစ်သည်။
ဒေါ်အောင်ဆန်း စုကြည်နှင့် ပထမဆုံး တွေ့ဆုံ မေးမြန်းခဲ့သည့် အချိန်တွင် သူ၏ မိခင်ဖြစ်သူ အကြောင်း ကျမက ရည်ရွယ်ချက် ရှိရှိဖြင့် အကြိမ် ကြိမ် မေးမြန်း ခဲ့ပါသည်။
အဘယ်ကြောင့် ဆိုသော် ဗိုလ်ချုပ် အောင်ဆန်းနှင့် ပတ်သက်သော ရေးသား မှုများ အမြောက် အမြား ရှိခဲ့ပြီး ဖြစ်သော်လည်း ဒေါ်ခင်ကြည်၏ အကြောင်းက အနည်းငယ် မျှသာ ရှိသည်။ မိခင်ဖြစ်သူထံမှ မည်သည့်အရာများသင်ယူ နိုင်ခဲ့ပါသလဲဟု မေးသည့်အခါ “တာဝန်သိမူ” ဟု ချက်ချင်းဖြေပါသည်။ ခဏမျှ စဉ်းစားပြီးသောအခါ “စည်းကမ်း၊ သတ္တိ၊ စိတ်ဓာတ်ကြံ့ခိုင်မှု အဲဒီအရည် အသွေးတွေ အားလုံးကို ကျမရဲ့ မိဘ ၂ ဦးလုံးဆီက ရရှိခဲ့တယ်လို့ ကျမထင်တယ်” ဟု သူက ထပ်ပြော သည်။
သူ၏မိခင်က ထူးခြားသည့် အမျိုးသမီး တယောက်၊ အလွန်ခွန်အားရှိသူ၊ အလွန်စည်းကမ်း ကြီးသူဟု သူကပြောသည်။ “ကျမရဲ့အဖေက ဖြစ် ချင်ခဲ့မယ်လို့ သူထင်ခဲ့တဲ့အတိုင်း ကျမကို ဦးဆောင် လမ်းပြခဲ့တယ်။ သူ့ရဲ့ အင်အားက သာမန်ထက် ပိုပါတယ်။ တခါတလေကျရင် သူက ပင်ကိုအား ဖြင့် ကျမအဖေထက် ပိုပြီး သတ္တိကောင်းသလားလို့ တောင် ထင်မိတယ်။ ကျမ အဖေလည်း ကျမလိုပဲ ရဲရင့်ဖို့အတွက် သင်ယူခဲ့ရတယ်လို့ ထင်တယ်။ ကျမ အမေကတော့ ဘာကိုမှ မကြောက်ဘူး”
ဒေါ်ခင်ကြည်၏ ဘဝဇာတ်ကြောင်းက ဧရာဝတီ မြစ်ဝကျွန်းပေါ်တောင်ပိုင်းမှ ဆန်စပါးနှင့် ငါးလုပ် ငန်းများ ထွန်းကားရာဒေသဖြစ်သည့် မြောင်းမြတွင် အစပြုခဲ့သည်။ မွေးချင်း ၁၀ ယောက်တွင် ၈ ယောက် မြောက်ဖြစ်သော ဒေါ်ခင်ကြည်ကို မိသားစုက ချစ်စနိုးဖြင့် “ဘေဘီ” ဟု ခေါ်ကြသည်။ အစပိုင်းက မြောင်းမြတွင်သာ ကျောင်းတက်ခဲ့သော်လည်း သူ၏ မိသားစုက ပိုမိုကောင်းမွန်စွာ ပညာသင်ကြားနိုင်ရေး အတွက် ရည်ရွယ်ပြီး ရန်ကုန်မြို့ရှိ ABM မိန်းကလေး အထက်တန်းကျောင်း (ယခု အထက (၁) ကြည့်မြင် တိုင်) သို့ စေလွှတ်ခဲ့သည်။
ထိုကျောင်းတွင် ဒေါ်ခင်ကြည်စာကောင်းကောင်း လိုက်နိုင်ခဲ့သော်လည်း ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်သို့ဝင် ရောက်ခွင့် မရရှိခဲ့ပါ။ ကောလိပ် ပညာရေးကို သင် ကြားရန် စိတ်ဆုံးဖြတ်ထားသည့် ဒေါ်ခင်ကြည်က ဆက်လက် ကြိုးစားခဲ့သည့်အတွက် မော်လမြိုင်မြို့ရှိ တခြား နှစ်ခြင်းသာသနာပြုကျောင်း တခုဖြစ်သည့်Morton Lane ဆရာအတတ်သင် ကောလိပ်သို့ ဝင်ရောက်ခွင့် ရှိခဲ့သည်။
ဇာတိမြို့သို့ ဒေါ်ခင်ကြည် ပြန်ရောက်သည့် အခါ အစိုးရကျောင်း တကျောင်းတွင် အလုပ်ဝင်ခဲ့ သည်။ သို့သော်လည်း တိတ်ဆိတ်ငြိမ်သက်သော ခရိုင်မြို့ကလေးတွင် ငြီးငွေ့လာသည်။ သူ၏ အစ်မ ၂ ယောက်က သူနာပြုဆရာမများ ဖြစ်နေပြီ ဖြစ် သည်။ ထို့ကြောင့် ရန်ကုန်သို့သွားပြီး ဆေးရုံကြီးတွင် သူနာပြုသင်တန်း တက်ရောက်ခဲ့သည်။
ဒေါ်ခင်ကြည်က လျင်လျင်မြန်မြန်ပင် လေ့လာ၊ တတ်မြောက်ခဲ့ပြီး ကျွမ်းကျင်၍ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် ယုံကြည်မှုရှိသော သူနာပြုဆရာမ တယောက်အဖြစ် အသိအမှတ်ပြုခြင်း ခံခဲ့ရသည်။
သူ၏ သူနာပြုဘဝ အစောပိုင်းကာလများအတွင်း တွင်ပင် ဒေါ်ခင်ကြည်က အမျိုးသမီးတို့၏ အခွင့် အရေးကို မြှင့်တင် ပေးနေသည့် အမျိုးသမီးများ လွတ်လပ်ရေးအဖွဲ့ချုပ် (Women’s Freedom League) သို့ ဝင်ရောက်ခဲ့သည်။ သားဖွားဆေးရုံ သို့လည်း ခေတ္တပြောင်းရွှေ့ တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့ပြီး သားဖွားပညာနှင့် ပတ်သက်၍ ပိုမိုနားလည်အောင် လေ့လာခဲ့သည်။ ခွဲစိတ်ခန်းအတွင်းတွင် အကူအညီ ပေးရာတွင် အလွန်အားကိုး ရသည့်အတွက် သူ့ကို ရန်ကုန်ဆေးရုံကြီးသို့ ၁၉၄၁ ခုနှစ်တွင် ပြန်လည်ခေါ် ယူခြင်း ခံခဲ့ရသည်။ ထိုနှစ်တွင်ပင် စစ်ပွဲများ စတင် ဖြစ်ပွားခဲ့သည်။
အလုပ်များသည့် နေ့တနေ့တွင် ဗိုလ်ချုပ် အောင်ဆန်း အမည်ရှိ ဒေါသကြီးသော လူနာ တယောက် ဆေးရုံ လာတက်သည်။ ပင်ပန်းနွမ်းနယ် နေသော ဗိုလ်ချုပ် သည် မြန်မာနိုင်ငံ ကို ပြန်လည် သိမ်းယူရန် ဂျပန်တပ်များကို ကူညီနေ ချိန်တွင် ငှက် ဖျားရောဂါလည်း ခံစားနေရသည်။ ထိုအချိန်တွင် အသက် ၂၇ နှစ်သာ ရှိသေးသော်လည်း သူသည် သူရဲကောင်း တဦးအဖြစ် အများ၏ လေးစားမှုကို ရရှိထားသူဖြစ်ပြီး ကာကွယ်ရေး ဝန်ကြီး တာဝန်ယူ ထားရသူဖြစ်သည်။ ဆေးရုံကြီးမှ သူနာပြုအကြီး အကဲက ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း ကဲ့သို့သော လူနာမျိုးကို ပြုစုရန် အတွက် သင်တန်းသူ တယောက်ကို တာဝန် ချထားပေးရန် မသင့်လျော်ဟု ယူဆခဲ့သည့် အတွက် အရည် အချင်းရှိ သူနာပြု ဆရာမများထဲက တယောက် ဖြစ် သည့် ဒေါ်ခင်ကြည်ကို တာဝန်ချ ထားပေးခဲ့ သည်။
နေ့စဉ် ခေါင်းပေါ်တွင် ပန်းတပွင့် ပန်ထားလေ့ ရှိသည့် ဒေါ်ခင်ကြည် အတွက် အရေးကြီးသော တာဝန် တရပ်လည်း ဖြစ်ပါသည်။ ခေါင်းမာသော ဗိုလ်ချုပ်ကို သူ၏ တာဝန် ဝတ္တရား များကို ထမ်းဆောင် နိုင်လောက်အောင် ပြန်လည် ကျန်းမာလို ပါက ဆရာဝန် များ၏ ညွှန်ကြားချက်အတိုင်း လိုက်နာပေးရန်လည်း တဖွဖွ တိုက်တွန်းပြောဆို ရသည်။ ဒါကပဲ ဗိုလ်ချုပ် အောင်ဆန်း လိုအပ်နေသော ချစ်ခြင်းမေတ္တာမျိုး ဖြစ်သည်။ ရောဂါဝေဒနာ သက်သာ သွားရုံသာ မက အချစ်ကိုပါ ခံစားနိုင်သွားခဲ့သည်။
သူ့အတွက် ရှားရှား ပါးပါး လမ်းကြောင်းပြောင်းလဲ မှုလည်း ဖြစ်ပါ သည်။ အမှန်တကယ် မျိုးချစ်သူများသည် သူတို့ လုပ်ဆောင် ရမည့် တာဝန်ကို အတားအဆီး ဖြစ်စေ မည့် အန္တရာယ်ကြီးသော စိတ်ကူးယဉ် ကိစ္စများတွင် ပါဝင်မည့် အစား နွားထီး များကဲ့သို့ သင်းကွပ် ပစ်သည် က ပိုကောင်းလိမ့်မည်ဟု သူ၏ ရဲဘော်ရဲဘက် များကို မကြာသေးမီကမှ သူပြော ခဲ့သေးသည်။ အခုအချိန် မှာတော့ သူ့ကိုယ်သူ ပြန်၍ တားဆီးမိလေပြီ။
သူတို့ မင်္ဂလာပွဲက ကျင်းပခါနီး အချိန်တွင် ဖျက်သိမ်းလုနီးနီး ဖြစ်ခဲ့ရသည်။ နှစ်ပေါင်းများစွာ အသောက်အစား အပျော်အပါးကို ရှောင်ရှားခဲ့သော ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းကို ဂျပန်အရာရှိများက လူပျိုည ပါတီပွဲတခု ညလုံးပေါက်ကျင်းပပေးခဲ့သည်။ မင်္ဂလာ ဆောင်နေ့မတိုင်မီ နံနက်ခင်းတွင် အရက်သောက် ထားသော ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းက အိမ်သို့ ဒယီး ဒယိုင်ဖြင့် ပြန်လည်ရောက်ရှိလာသည်။
အရက် သေစာကို လုံးဝရှောင်ကြဉ်သည့် နှစ်ခြင်းခရစ်ယာန် ဘာသာဝင် တယောက်ဖြစ်သော ဒေါ်ခင်ကြည် အတွက် ဒေါသဖြစ်စရာ၊ စိတ်မချမ်းမြေ့စရာ ဖြစ်ခဲ့ရ သည်။ မင်္ဂလာပွဲကို ဖျက်သိမ်းပေးရန် တောင်းဆိုကြောင်း ဒေါ်ခင်ကြည်က ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းကို ပြောခဲ့သည်။ နောက် သူဘယ်တော့မှ အရက် မသောက်တော့ပါဟု ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းက ကျိန်ဆို ကတိပေးခဲ့သည်။
သူ၏ ကတိစကားကို ဒေါ်ခင်ကြည်က လက်ခံပြီး ခွင့်လွှတ်ခဲ့သည်။ ၁၉၄၂ ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာလ ၆ ရက်နေ့တွင် သူတို့ လက်ထပ်ခဲ့ကြသည်။ သူ၏ကတိကိုလည်း စောင့်ထိန်း ခဲ့သည်။
အိမ်ထောင်သည်ဘဝ၏ ပထမဆုံး နှစ်များ အတွင်းတွင် ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းအတွက် ကြီးမား သောဖိအားများကို ခံစားခဲ့ရသည်။ တရားဝင်အား ဖြင့် ဂျပန်အာဏာပိုင်များအတွက် ကာကွယ်ရေး ဝန်ကြီးအဖြစ် တာဝန်ထမ်းဆောင်နေသော်လည်း နောက်ကွယ်တွင်မူ ဂျပန်လက်အောက်မှ လွတ် မြောက်ရေးအတွက် နည်းလမ်းတခုကို ရှာဖွေနေခဲ့ သည်။ မြန်မာ့လွတ်လပ်ရေးအတွက် မျှော်လင့်ချက် များကို ဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားရန် သူဆုံးဖြတ်ခဲ့ သည်။
ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းက ဗြိတိသျှတို့နှင့် တွေ့ဆုံမှုများ စတင်ပြုလုပ်လာခဲ့သည်။ အကယ်၍ သူ၏အားထုတ်မှုများသာ ပေါ်ပေါက်သွားခဲ့လျှင် ဂျပန်များကို သစ္စာဖောက်သည့်အတွက် အန္တရာယ် နှင့် ရင်ဆိုင်ရတော့မည် ဖြစ်သည်။ ထိုအချိန်တွင် သူ၏ဇနီးသည်က ယုံကြည်စိတ်ချရသူ၊ ဖြေသိမ့်ပေး နိုင်သူ ဖြစ်လာသည်။
စစ်ကြီးပြီးသွားသည့်အခါ သူတို့မိသားစုသည် အမှတ် ၂၅ တာဝါလိန်းလမ်းမှ အိပ်ခန်း ၂ ခန်း ပါသည့်အိမ်တွင် အခြေချနေထိုင်ခဲ့ကြသည်။
သစ်သားများဖြင့် လှပစွာဆင်ယင်ထားသည့် ဧည့်ကြိုခန်းတခုက အောက်ထပ်မှာရှိပြီး ဗိုလ်ချုပ် အောင်ဆန်းက အရေးကြီးသည့် ပုဂ္ဂိုလ်များနှင့် တွေ့ဆုံသောနေရာ ဖြစ်သည်။ သူ့အိမ်တံခါးကို ဧည့်သည်များအတွက် အမြဲတမ်း ဖွင့်ထားပေးသည်။ အချိန်မရွေး သူ့ထံသို့လာရောက်ပြီး စကားပြော နိုင်ကြသည်။
ဒေါ်ခင်ကြည်နှင့် ကလေးများကို တွေ့ရန် အတွက် နေ့လယ်စာစားချိန်တွင် အိမ်သို့ပြန်လာရ သည်ကို ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း သဘောကျသည်။ အစိုးရ လုပ်ငန်းတာဝန်များကြောင့် မကြာခဏ အဝေးသို့ ရောက်နေရသော်လည်း အိမ်မှာရှိနေသည့် အချိန်တွင် သူတို့လင်မယားက ညနေခင်းကို ပုံမှန် အိမ်ထောင်သည်များ အတိုင်း နေထိုင်ကြသည်။
ဒေါ်ခင်ကြည်က အဝတ်များချုပ်သည်။ ပန်းထိုးသည်။ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းက စာဖတ်သည်။ သူက ဇနီးဖြစ်သူနှင့် ပတ်သက်၍ တော်တော်လေး ကျေနပ် စိတ်တိုင်းကျ သည်။ ဒေါ်ခင်ကြည်က သူ့ကို လူသား ဆန်စေ၏။
တခါတရံ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း ခရီးသွားသည့် အခါ ဇနီးသည်ကို ခေါ်သွားလေ့ရှိသည်။ မိမိရှိနေ ခြင်းက ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းကို သူခံစားနေရသည့် ဖိအားများမှ သက်သာရာ ရရှိစေကြောင်း ဒေါ် ခင်ကြည် သိခဲ့သည်။
သူ့ကို လုပ်ကြံသတ်ဖြတ်ကြမည့်နေ့တွင် ဗိုလ်ချုပ် အောင်ဆန်းက ကလေးများကို ပွေ့ဖက်နှုတ်ဆက်ပြီး အလုပ်ရှိရာကို ထွက်သွား ခဲ့သည်။ အန္တရာယ်ရှိ ကြောင်း သတိပေးမှုများ ရှိနေသော်လည်း သူက လုပ်ဆောင်ရမည့် အစီအစဉ်များကို မပယ်ဖျက်ခဲ့ပါ။ လွန်ခဲ့သော ၃ ရက်ကပင် သူ့ကိုလုပ်ကြံရန် လျှို့ဝှက် စီစဉ်မှုတခုရှိနေကြောင်း ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း ကြား သိခဲ့ရသည်။ သို့သော်လည်း သူက ကလေးများကို အပြုံးနှင့် နှုတ်ဆက်၍ အိမ်မှထွက်သွားခဲ့သည်။ နောက်ထပ် နာရီအနည်းငယ်ကြာသည့်အခါ ဒဏ်ရာ အမြောက်အမြားနှင့် သူ၏ ရုပ်အလောင်းကို ရန်ကုန် ဆေးရုံကြီးသို့ ပို့ဆောင်ခဲ့ကြသည်။
လုပ်ကြံခံရသည့်အကြောင်းကို ဒေါ်ခင်ကြည် ကြားရသည့်အချိန်တွင် ရန်ကုန်ဆေးရုံကြီးသို့ အပြေးအလွှား သွားရောက်ခဲ့သည်။ သို့သော်လည်း သူ့ခင်ပွန်းကိုကူညီဖို့ အလွန်နောက်ကျခဲ့ပြီဖြစ်သည်။ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း၏ ဦးခေါင်းကို သူ့ရင်ခွင်ထဲတွင် ညင်သာစွာ ပွေ့ပိုက်ထားချိန်တွင် ဒဏ်ရာများမှသွေး များ တစိမ့်စိမ့် ထွက်နေဆဲဖြစ်သည်ဟု သတင်းများ ကဆိုသည်။
ဒေါ်ခင်ကြည် တိတ်ဆိတ်စွာဖြင့် အကြာကြီး ထိုင်နေခဲ့သည်။ ငိုကြွေးဖို့ပင် မတတ်နိုင်အောင် ဖြစ်ခဲ့သည်။ ထို့နောက် ကျွမ်းကျင်သော သူနာပြု ဆရာမ တယောက် အဖြစ်သို့ သူပြန်ရောက် သွား သည်။ ခင်ပွန်းသည်၏ ရုပ်အလောင်းကို အသုဘရှု လာသူများ ကြည့်၍ အဆင်ပြေစေရန် အတွက် သွေး များကို ညင်သာစွာ ဖယ်ရှားပေးပြီး ဒဏ်ရာများကို သန့်ရှင်းအောင် ပြုလုပ်ပေး ခဲ့သည်။ ဗိုလ်ချုပ် အောင်ဆန်း၏ ရုပ်အလောင်းကို စင်မြင့်ပေါ်တွင် တင်ထားသည်ကို မှတ်တမ်းတင် ထားသည့် ဓာတ်ပုံ များတွင် ခင်ပွန်းသည်၏ အခေါင်းဘေးတွင် သစ်သား ကုလားထိုင် တလုံးဖြင့် ထိုင်နေသော ဒေါ်ခင်ကြည် ကို မြင်တွေ့ရသည်။
ဒေါ်ခင်ကြည်က သူ၏ ကျန်ရှိသော ဘဝအချိန် များတွင် အတိတ်ကို ပြန်လည် တမ်းတနေခြင်းဖြင့် မကုန်ဆုံး ခဲ့ပါ။ ကလေးငယ် ၃ ယောက်ကို ပြုစု စောင့်ရှောက်ရမည့် ကြီးလေး သည့် တာဝန်များလည်း ရှိနေသည်။ အစိုးရသစ်ကလုပ်ကြံခံခဲ့ရသည့် ဝန်ကြီး များ၏ ဇနီးသည်များကို ထောက်ပံ့ကြေးငွေ အနည်း ငယ်ပေးသော်လည်း ထိုပမာဏက တိုး လာနေသည့် ကုန်ကျစရိတ်များနှင့် ကလေးငယ်များ၏ ပညာရေး အတွက် လုံလောက်မှုမရှိပါ။ ထို့ကြောင့် ဒေါ်ခင် ကြည်က သူနာပြုဆရာမအလုပ်ကို ပြန်လည်ရရှိ နိုင်ရေးအတွက် ရန်ကုန်ဆေးရုံကြီးသို့ တိတ်တဆိတ် ဆက်သွယ် ခဲ့သည်။
သို့သော်လည်း ထိုအချိန်က ဝန်ကြီးချုပ်တာဝန် ထမ်းဆောင်နေသူဦးနုက ကျဆုံး သွားခဲ့သော တိုင်း ပြည်ခေါင်းဆောင်၏ ဇနီးသည်အတွက် ပိုမိုဂုဏ် သိက္ခာရှိသော ရာထူး အဆင့် အတန်းတခု ရှိသင့်သည် ဟု ယူဆခဲ့သည်။ ထို့ကြောင့် ဒေါ်ခင်ကြည်ကို မိခင် နှင့်ကလေး စောင့်ရှောက်ရေး ဘုတ်အဖွဲ့ ညွှန်ကြား ရေးဝန် အဖြစ် ခန့်အပ်ခဲ့သည်။
သားဖွားဆရာမဟောင်း ဖြစ်သည့်အတွက် ဒေါ်ခင်ကြည်က မြန်မာနိုင်ငံမှ အမျိုးသမီးများ ရင်ဆိုင်နေ ကြရသည့် အခက်အခဲများကို ကောင်းစွာ နားလည်ကျွမ်းကျင်ပြီး ၎င်းတို့ကို ကူညီနိုင်မည့် နည်းလမ်းများကို သိရှိသူလည်းဖြစ်သည်။ လွတ်လပ် ပြီးခေတ် ပထမဆုံး ပါလီမန်တွင်လည်း အမျိုးသမီး အမတ်အဖြစ် ရွေးချယ်တင်မြှောက်ခြင်း ခံခဲ့ရသည်။ ၁၉၅၃ ခုနှစ်တွင် မြန်မာနိုင်ငံ၏ ပထမဆုံးသော လူမှုဝန်ထမ်း ဝန်ကြီးအဖြစ် ခန့်အပ်ခြင်းခံခဲ့ရသည်။ ဒေါ်ခင်ကြည် ကို ကျွမ်းကျင်သည့် အုပ်ချုပ်ရေးမှူး တယောက်အဖြစ် သိလာကြသလို သူ၏ စည်းကမ်း ပြည့်ဝသော စီမံခန့်ခွဲမှု စွမ်းရည်ကြောင့်လည်း ချီးကျူးဂုဏ်ပြု ခံခဲ့ရသည်။
သူ၏ မီးဖိုချောင်စားပွဲ သည် နိုင်ငံရေးစကားများ ဆွေးနွေးပြောဆိုကြသည့် နေရာတခု ပြန်ဖြစ်လာခဲ့သည်။ ယခုတကြိမ်တွင်မူ သူက ဦးဆောင်ပြောဆိုသူ ဖြစ်ပါသည်။
ခင်ပွန်းသည် ကွယ်လွန်သွားပြီးနောက်တွင် သားသမီးများ၏ဘဝကို ပုံမှန်အတိုင်း ပျိုးထောင်ပေး နိုင်ရန် ဒေါ်ခင်ကြည်က ကြိုးစားခဲ့ပါသည်။ သူတို့၏ ဖခင်ကို လေးစား အမှတ်ရနေစေရန်နှင့် ဗိုလ်ချုပ် အောင်ဆန်း၏ သား၊ သမီးများအနေဖြင့် သူတို့ တာဝန်သိစွာ နေထိုင်ရမည့် တာဝန်တို့ကို နားလည် စေရန် အားထုတ်ခဲ့သည်။
နောက်ထပ် ဝမ်းနည်းစရာ ကိစ္စတခု ၁၉၅၃ ခုနှစ် ဇန်နဝါရီလတွင် ပေါ်ပေါက်လာသည်။ ဒုတိယ သားဖြစ်သူ အောင်ဆန်းလင်း (ဒေါ်အောင်ဆန်း စုကြည်နှင့် အနီးကပ်ဆုံး ကစားဖော်ဖြစ်ခဲ့သူ) သည် တာဝါလိန်းလမ်းနေအိမ် ခြံဝန်းအတွင်းမှ ရေကန် တွင် မတော်တဆ ရေနစ်ရာမှ သေဆုံးခဲ့ရသည်။
အောင်ဆန်းလင်း သေဆုံးသွားပြီးနောက်တွင် ဝန်ကြီးချုပ် ဦးနုက သူတို့မိသားစုကို ရင်နာစရာ အမှတ်တရများနှင့် ရောယှက်နေသည့် တာဝါလိန်း လမ်းအိမ်မှ ပြောင်းရွှေ့နိုင်အောင် စီစဉ်ပေးခဲ့သည်။ သူတို့ပြောင်းရွှေ့နေထိုင်ခဲ့သော အိမ်မှာ နောက်ပိုင်း တွင် အလွန်ထင်ရှား လူသိများခဲ့သော အမှတ် (၅၄) တက္ကသိုလ်ရိပ်သာလမ်းရှိ အိမ်ဖြစ်သည်။
ဒေါ်ခင်ကြည်၏အိမ်သို့ ထင်ရှားသူ၊ ထူးချွန်သူ များလည်း မှန်မှန်ရောက်လာကြသည်။ သူတို့တွေက ကလေးငယ်တွေ ကြီးပြင်းလာသည့် အချိန်မှာ လွှမ်းမိုးမှုရှိခဲ့ကြသူတွေ ဖြစ်သည်။ ဒေါ်အောင်ဆန်း စုကြည် ငယ်စဉ်က အမေး အမြန်းထူသည့် သဘာဝ ရှိ သည်ဟုဆိုသည်။ အလုပ်ကပြန်လာသည့် မိခင် ကို မေးခွန်းတွေ အမျိုးမျိုးမေးပြီး နားပူနားဆာလုပ် လေ့ရှိသည်။ ဒေါ်ခင်ကြည်က မေးလာသော မေးခွန်း တိုင်းကိုဖြေပေးပြီး သမီးဆန္ဒအား ဖြည့်ဆည်းပေး ခဲ့မည်ကို သံသယဖြစ်စရာ မလိုပါ။ “အမေ အရမ်း ပင်ပန်းနေပြီ။ အမေ့ကို ဒီမေးခွန်းတွေ လာမမေးနဲ့လို့ ဘယ်တုန်းကမှ သူမပြောခဲ့ဖူးဘူး” ဟု ဒေါ်အောင် ဆန်းစုကြည်က နောက်ပိုင်းတွင် ပြန်ပြောပြသည်။
သူ၏ မိခင်က အလွန်တင်းကျပ်ခဲ့ကြောင်း ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် လက်ခံပါသည်။ အလွန် အကျွံပင် ဖြစ်ကောင်းဖြစ်ခဲ့နိုင်ပါသည်။ သို့သော် လည်း ထိုသို့ စည်းကမ်းထားခဲ့ခြင်းကြောင့် ဘဝတွင် စိတ်မချမ်းမြေ့ဖွယ်ရာများနှင့် ကြိုတင်မသိနိုင်သည့် အလှည့်အပြောင်းများ အမြောက်အမြား ကြုံလာရ သည့်အချိန်တွင် ကြံ့ကြံ့ခံရပ်တည်နိုင်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည် ဟု ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က အသိအမှတ်ပြု နားလည်ခဲ့ပါသည်။
(ဒေါ်ခင်ကြည်သည် ၁၉၆၀ ခုနှစ်တွင် အိန္ဒိယ နိုင်ငံဆိုင်ရာ မြန်မာသံအမတ်ကြီးအဖြစ်ခန့်အပ်ခြင်း ခံခဲ့ရသည်။ မြန်မာနိုင်ငံ၏ ပထမဆုံး အမျိုးသမီး သံအမတ်ကြီးဖြစ်သည်။ သူတို့မိသားစုလည်း နယူး ဒေလီမြို့သို့ ပြောင်းရွှေ့ခဲ့ကြသည်။ ၁၉၆၇ ခုနှစ်တွင် တာဝန်မှ အနားယူ၍ ရန်ကုန်သို့ ပြန်လာကာ အေးချမ်းစွာနေထိုင်ရင်း ၁၉၈၈ ခုနှစ်တွင် ကွယ်လွန် ခဲ့သည်။ ကွယ်လွန်ချိန်တွင် အသက် ၇၆ နှစ် ရှိပြီ ဖြစ်သည်။)
(မတ်လထုတ် The Irrawaddy မဂ္ဂဇင်းတွင် ဖော်ပြထားသော Rena Pederson ၏ Daw Khin Kyi’s Abiding Impact ကို နိုင်မင်းသွင် ဘာသာပြန်ဆိုသည်)
မျှဝေသူ Te Tee မှာ Saturday, April 25, 2015 No comments:
ကဏ္ဍ ကမ္ဘာကျော်များ, သမိုင်း
၂၀၁၄ ခုနှစ် အတွင်း ကမ္ဘာ့ အသက် ငယ်ဆုံး ဘီလျံနာ သူဌေးများ စာရင်းကို Forbes စီးပွားရေး မဂ္ဂဇင်း ထုတ်ပြန်
၂၀၁၄ ခုနှစ် အတွင်း အသက် ၄၀ အောက် ကမ္ဘာ့ အသက် ငယ်ဆုံး ဘီလျံနာ သူဌေးများ စာရင်းကို Forbes မဂ္ဂဇင်းက ထုတ်
ယခုနှစ် စာရင်းတွင် အသက် ၄၀ ကျော် သွားပြီဖြစ်သော Google ကုမ္ပဏီမှ ဆာဂေးဘရင်နှင့် လာရီပေ့ခ်ျတို့ မပါဝင် တော့ဘဲ
ဟောင်ကောင်မှ ပီရင်နာကေး က ဖေ့စ်ဘွတ် ပူးတွဲ ထူထောင်သူ ကမ္ဘာ့ အသက်ငယ်ဆုံး ဘီလျံနာ ဒတ်စ်တင် မော့စ်ကို ဗစ်ဇ်
၏ နေရာသို့ ရောက်ရှိ လာသည်။
အသက် ၂၄ နှစ်
အသားတင် ပိုင်ဆိုင်မှု အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၁ ဒသမ ၃ ဘီလျံ
ကေးသည် ဟောင်ကောင်မှ အိမ်ယာ ကုမ္ပဏီ တစ်ခု ဖြစ်သော Logan Property Holdings ၏ ကုမ္ပဏီခွဲ များတွင် အစုရှယ် ယာ ၈၅ ရာခိုင်နှုန်းနှင့် မိသားစု ပစ္စည်း များကို ပိုင်ဆိုင် ထားသည်။
ဒတ်စ်တင် မော့စ်ကိုဗစ်ဇ် (ဆော့ဖ်ဝဲကုမ္ပဏီပိုင်ရှင်)
အသားတင်ပိုင်ဆိုင်မှု ဒေါ်လာ ၆ ဒသမ ၈ ဘီလျံ
မာ့ခ် ဇူကာဘတ်ဂ်ျ ၏ အခန်းဖော် တစ်ဦးဖြစ်ပြီး ဖေ့စ်ဘွတ်ကို ထူထောင်သူ မော့စ်ကိုဗစ်ဇ် သည် လူမှု ကွန်ရက် မီဒီယာ လုပ် ငန်းကို ၂၀၀၈ ခုနှစ် တွင် စွန့်ခွာ ခဲ့ပြီး Asana အမည်ရှိ ဆော့ဖ်ဝဲ ကုမ္ပဏီ တစ်ခု ကို ထူထောင် ခဲ့သည်။
အသားတင်ပိုင်ဆိုင်မှု ဒေါ်လာ ၂၈ ဒသမ ၅ ဘီလျံ
ဇူကာဘာ့ဂ်ျသည် ဖေ့စ်ဘွတ်၏ အစုရှယ်ယာများ လွန်ခဲ့သော နှစ် အနည်းငယ် အတွင်းမှ စ၍ ယခုနှစ် ဖေဖော်ဝါရီ လ မတိုင်မီ် ၁၃၀ ရာခိုင်နှုန်း မြင့် တက်သွား သည့် အချိန်တွင် ၎င်း၏ အသားတင် ပိုင်ဆိုင်မှု အရပ်ရပ်မှာ နှစ်ဆခန့် မြင့်တက် သွားသည်။
အသားတင် ပိုင်ဆိုင်မှု ဒေါ်လာ ၁ဒသမ ၃၅ ဘီလျံ
အန်တန်ကာသရင်သည် မိသားစု ပိုင် Kathrein-Werke AG ကုမ္ပဏီအား ဦးဆောင်သည့် တတိယ မျိုးဆက် ဖြစ်သည်။ ကမ္ဘာ့ သက်တမ်း အရင့်ဆုံးနှင့် အကြီးမားဆုံး အင်တာနာ ထုတ်လုပ်သူ အဖြစ် ၎င်း၏ ၀က်ဘ်ဆိုင် တွင် ဖော်ပြ ထားသည်။
ဒရူးဟော့စတန် (Silicon Valley)
အသက် ၃၀ နှစ်
အသားတင်ပိုင်ဆိုင်မှု ဒေါ်လာ ၁ ဒသမ ၂ ဘီလျံ
အမေရိကန် နိုင်ငံ ကယ်လီ ဖိုးနီးယား ပြည်နယ် ဆန်ဖရန် စစ္စကို မြို့မှ Dropox ကုမ္ပဏီ အား ပူးတွဲ တည်ထောင်သူ နှင့် စီအီး အို ဖြစ်သူ ဒရူးဟော့ စတန် သည် Silicon Valley က ဇန်န၀ါရီ လအတွင်း ငွေကြေး အရင်း အနှီး ဒေါ်လာ ၁၀ ဘီလျံ ထပ်မံ မြှုပ်နှံ လိုက်သော အခါတွင် ဘီလျံနာ အသစ်တစ်ဦး ဖြစ်လာသည်။
အသားတင်ပိုင်ဆိုင်မှု ဒေါ်လာ ၃ ဒသမ ၈ ဘီလျံ
၎င်း၏ ပိုင်ဆိုင်မှု များတွင် အိမ်ယာ လုပ်ငန်း၊ ပန်းချီ ပြခန်းနှင့် ဂျာမနီ နိုင်ငံတွင် ၃၆၀၀၀ ဟက်တာ အကျယ် အ၀န်း ရှိပြီး ဥရော ပတိုက်တွင် အကျယ်ဆုံး ဖြစ်သည့် ကိုယ်ပိုင် တောအုပ် တစ်ခုကို ပိုင်ဆိုင် ထားသည်။
အသက် ၃၁ နှစ်
အသားတင်ပိုင်ဆိုင်မှု ဒေါ်လာ ၆ ဒသမ ၃ ဘီလျံ
Enterprise Product Partners ၏ အစုရှယ်ယာ ဈေးနှုန်းများ မြင့်တက် လာခြင်းနှင့် အမြတ်ခွဲဝေ ပေးသည့် ပမာဏ မြင့်တက် လာသောကြောင့် စကော့ဒန်ကန် သည် ယခင်နှစ် ကထက် ဒေါ်လာ ၁ ဒသမ ၂ ဘီလျံ ပိုမို ကြွယ်ဝ ချမ်းသာ လာသည်။
အသားတင် ပိုင်ဆိုင်မှု ဒေါ်လာ ၄ ဒသမ ၁ ဘီလျံ
အီဒူရာဒို ဆာဗာရင် သည် မီဒီယာ များနှင့် များစွာ ထိတွေ့မှု မရှိဘဲ နောက်ကွယ်မှ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံ ထားသူ အဖြစ်သာ နေလေ့ ရှိသည်။
အသက် ၃၂ နှစ်
အသားတင်ပိုင်ဆိုင်မှု ဒေါ်လာ ၆ ဒသမ၉ ဘီလျံ
တရုတ် နိုင်ငံ၏ အကြွယ်ဝဆုံး အမျိုးသမီး ဖြစ်ပြီး အိမ်ယာ ဆောက်လုပ်ရေး လုပ်ငန်း Country Garden ၏ ဒုတိယ ဥက္ကဌ ဖြစ်သည်။
အသက် ၃၃ နှစ်
လုပ်ကြံ သတ်ဖြတ်ခြင်း ခံခဲ့ရသည့် လက်ဘနွန် ၀န်ကြီးချုပ် ရာဖစ်ဟာရီရီ ၏ အငယ်ဆုံး သားဖြစ်သည် ၂၀၀၄ ခုနှစ်တွင် ပြင်
သစ်နိုင်ငံ Ecole Spéciale d'Architecture de Paris ကျောင်းမှ ဘွဲ့ရ ခဲ့သည်။
Written by အောင်ခင်
Mizzima Burmese News မှ ကူး ယူ မျှ ဝေ ပါ သည်။
မျှဝေသူ Te Tee မှာ Sunday, August 17, 2014 No comments: